မသေချာမရေရာမှုအောက်တွင်မမှန်မကန်ရွေးချယ်မှုသည် Striatal D2 /3Receptor များနှင့်ကြွက်များတွင်ချည်နှောင်ခြင်း (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn On
မငြိမ်သက်မှုကြောင့်အောက်မှာအဓိပ်ပါယျမရှိသောရွေးချယ်မှုသည်အထိအတွက် binding အောက်ပိုင်း Striatal D2 /3receptor (2012) နဲ့ဆက်နွယ်နေပါသည်
Catharine အေ Winstanley1
စာရေးသူပံ့ပိုးမှုများကို: VS နှင့် CAW ဒီဇိုင်းသုတေသန; PJC, KD နှင့် RK သုတေသနဖျော်ဖြေ; PJC, KD နှင့် CAW data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ; PJC နှင့် CAW စက္ကူရေးသားခဲ့သည်။
အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်, 31 အောက်တိုဘာလ 2012, 32(44): 15450-15457; doi: 10.1523/JNEUROSCI.0626-12.2012
အနိမ့် striatal: D အပါအဝင် dopamine အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု (DA) အချက်ပြ,2 /3ဒီ phenotype ဓာတုမဟုတ်သောစွဲမှုမှလွယ်ကူစွာထိခိုက်ပေးအပ်ခြင်းရှိမရှိမသိရသေးပေမယ့်ပေမယ့် receptors, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမှအားနည်းချက်တိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ မသေချာမရေရာမှုအောက်တွင်ရွေးချယ်သောအခါလူတို့သည်“ ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့သော” သိမြင်မှုဆိုင်ရာ heuristics ကိုမည်သည့်အတိုင်းအတာဖြင့်အသုံးပြုသည်ဆိုသည်မှာလောင်းကစားစွဲလမ်းခြင်းရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ striatum signal ကိုဆုလာဘ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ modulate မှ dopaminergic စီမံချက်များ, DA အချက်ပြအတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုထိုကဲ့သို့သောဘက်လိုက်မှုများ၏အတိုင်းအတာသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ကြောင်းပေးထားသည်။ ဤယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြွက်များတွင်ဘက်လိုက်မှု၊ စွန့်စားမှုမှရှောင်ကြဉ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းပုံစံကိုပုံစံအသစ်တစ်ခုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်များသည်လောင်းကြေးကိုအာမခံချက်ပေးသော“ လုံခြုံသော” လီဗာသို့မဟုတ်ရွေးချယ်မှု ၅၀:၅၀ အလေးသာမှုဖြင့်လောင်းကြေးကိုနှစ်ဆဖြစ်စေ၊ အလောင်းအစား၏အရွယ်အစားမှာသကြားလုံးတစ်လုံးမှ ၃ ခုအထိကွဲပြားသည်။ အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏသည်ရွေးချယ်မှုများ၏အသုံးဝင်မှုကိုမပြောင်းလဲနိုင်သော်လည်းအလောင်းအစားအရွယ်အစားကြီးလာသည်နှင့်အမျှ“ အထိခိုက်မခံသော” ကြွက်အုပ်စုငယ်များသည်အလောင်းအစား၏အရွယ်အစားတိုးလာသည်နှင့်အမျှအန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်, wager- အာရုံမခံစားနိုင်သောကြွက်အနည်းငယ်တသမတ်တည်းမသေချာမရေရာ option ကိုပိုမိုနှစ်သက်။ အမ်ဖီတမင်းသည်မသေချာမရေရာသောရွေးချယ်မှုကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာရွေးချယ်နိုင်သည်။2 /3အဲဒီ receptor ရန်တစ်ဦးတည်းအာမခံ-ထုံထိုကြွက်များတွင်မသေချာမရေရာလီဗာရွေးချယ်မှုလျော့နည်းသွားသည်။ micro-ပေနှင့် autoradiography သုံးပြီး [11ကို C] raclopride မြင့်မားသောအာမခံ sensitivity ကိုနှင့်အနိမ့် striatal: D အကြားခိုင်မာသောဆက်စပ်မှုကိုအတည်ပြု2 /3အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆ။ ဤရွေ့ကားဒေတာမသေချာမရေရာအောက်မှာဘက်လိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းများအတွက် propensity striatal D ကိုကလွှမ်းမိုးကြောင်းအကြံပြု2 /3အဲဒီ receptor စကားရပ်များနှင့်ဓာတုနှင့်အမူအကျင့်စှဲဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်ဘုံ neurobiological အခြေခံ share စေခြင်းငှါ၎င်းအယူအဆများအတွက်ဝတ္ထုထောက်ခံမှုပေး။
ဆုံးဖြတ်ချက်အများစုတွင်အန္တရာယ်သို့မဟုတ်မသေချာမရေရာမှုများပါဝင်သည်။ Bayesian ၏ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုကို အသုံးပြု၍ မည်သည့်ရွေးချယ်မှုမဆိုမျှော်မှန်းထားသောတန်ဖိုးကိုရလဒ်တစ်ခု၏တန်ဖိုးနှင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေ၏ထုတ်ကုန်အဖြစ်တွက်ချက်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောအခြေခံမူများကိုနားလည်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်အဓိကအားဖြင့်သိမြင်မှုဘက်လိုက်မှု (လွှမ်းမိုးမှု) ကြောင့်ဖြစ်သည်။Kahneman နှင့် Tversky, 1979) ။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါတို့သည်အာမခံချက်ဆုံးရှုံးမှု (ရှောင်ရှားရန်ပြဿနာအန္တရာယ်-ရှာကြံဖန်တီးပေးသွားနိုငျသောဘက်လိုက်မှုကတော့အာမခံတိုးအဖြစ်မရေရာ၏အလွန်အကျွံသည်းမခံသောများမှာTrepel et al ။ , 2005) ။ သင်္ချာဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာထိုသို့သောနည်းဗျူဟာ suboptimal ဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပွငျအဓိပ်ပါယျမရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်ချအန္တရာယ်အောက်မှာ (ပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်း (PG) ၏ပေါ်ထွန်းခြင်းနှင့်ပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Ladouceur နှင့် Walker က, 1996; Miller နဲ့ဟင်း, 2008; Emond နှင့် Marmurek, 2010) နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအဓိပ်ပါယျမရှိသောသိမြင်ဆုံး (PG များအတွက်သိမြင်မှုကုထုံး၏အဓိကပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်Sylvain et al ။ , 1997; Ladoucer et al ။ , 2001) ။ ဤအဆုံးဖြတ်ချက်ချဘက်လိုက်မှု၏ဇီဝအခြေခံနားလည်ခြင်းထို့ကြောင့်လောင်းကစားဝိုင်းသို့တန်ဖိုးရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်၎င်း၏စွဲလမ်းသဘောသဘာဝများကိုနိုင်ဘူး။
အဆိုပါ dopamine (DA) စနစ်မူးယစ်ဆေးစွဲနေတဲ့အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြောင်းပေးထားသောကြောင့် DA လှုပ်ရှားမှုအတွင်းကွဲပြားခြားနားမှု PG အထောက်အကူပြုဖို့တွေးဆခဲ့ကြကြောင်းဖြစ်ကောင်း unsurprising ဖြစ်ပါတယ်။ DA ၏လုပ်ရပ်များ potentiates သော psychostimulant စိတ်ကြွဆေး, (ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေအတွက်အလောင်းအစားဖို့ drive ကိုတိုးမြှင့်သော်လည်းမကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက်နိုင်ပါတယ်Zack နှင့် Poulos, 2004), ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေ DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်တိုးမြှင့်ပေးရန် hypersensitive ဖြစ်မည်အကြောင်းညွှန်ပြ။ DA ကိုလည်း (ထို striatum အတွင်းဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားများကိုပြ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကြောင့်တစ်ဦးအာရုံခံအဆင့်မှာအန္တရာယ်ကိုယ်စားပြုအတွက်အခြေခံကျကျအရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်Schultz et al ။ , 1997; Cardinal et al ။ , 2002; O'Doherty et al ။ , 2004; နေ့ et al ။ , 2007) ။ dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများ (ကြွက်များနှင့်လူသားတွေအတွက်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာရလဒ်များအကြားဆုံးဖြတ်ချက်ချ modulate ပြခဲ့ကြကြောင်းပေးထားPessiglione et al ။ , 2006; စိန့်Öngeနှင့် Floresco, 2009), DA အချက်ပြ, အထူးသဖြင့် striatum အတွင်း, သီအိုရီအန္တရာယ်အောက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ဘက်လိုက်မှုမှအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
လူ့သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. စမ်းသပ်မှုရှုပ်ထွေးသောဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာအခြေခံသည့်ယန္တယားသို့အရေးပါသောအထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးနိုင်ပါသည်။ သိမြင်မှုပျက်ယွင်းများစွာသောလူလောင်းကစားသမားတွေအတွက်ဖော်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်း, ကမဆိုပါလျှင်တစ်ဦး "စွဲ" ပြည်နယ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းသို့မဟုတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆီသို့အဓိပ္ပါယ်ရှိစွာအထောက်အကူပြုသောအတော်လေးမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောထီထဲမှာဂဏန်းကောက်နေသည့်အခါထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ်ဦးစားပေး၏ထင်ယောင်ထင်မှားအဖြစ်ဤဘက်လိုက်မှုအများတို့သည်လည်း nonhuman ဘာသာရပ်များအတွက်မော်ဒယ်မှမူလကပင်ခက်ခဲသည်။ ဒါဟာတဖက်သတ်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ preference ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါဘာသာရပ်များပျမ်းမျှတန်းတူငွေပမာဏသည်မိမိဘဏ္ဍာကိုသေချာနှင့်မသေချာမရေရာ options များအကြားရှေးခယျြသောအခါ, ဝေဖန်နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းစောဒကတက်နိုင်ပါတယ်။ ဆင်ခြင်တုံတရားဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများလစျြလြူရှုဖြစ်သင့်ပေမယ့်အများစုလူ့ဘာသာရပ်များပိုင်းတွင်အန္တရာယ်-ဆန္ဒရှိဖြစ်ကြောင်းနှင့်အာမခံဆုလာဘ်မျက်နှာသာအထူးသဖြင့်အာမခံတိုး (အဖြစ်Kahneman, 2003), တစ်ဦးချင်းစီကဒီဘက်လိုက်မှု၏အတိုင်းအတာများနှင့်ခံနိုင်ရည် (ရန်အဖြစ်ကွဲပြားပေမယ့်Weber et al ။ , 2004; ဘရောင်းနှင့် Braver, 2007, 2008; Gianotti et al ။ , 2009) ။ တစ်ဝတ္ထုဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဝန်အသုံးပြုခြင်း, ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ကြွက်ထိုနည်းတူပိုပြီးကျရောက်နေတဲ့အခါ, ရှယ်ယာတိုးမြှင့်မှာဆုလာဘ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်အန္တာရာယ်ရန်နှင့်ထိုသို့သောဘက်လိုက်မှု၏အရွယ်အစား DA အချက်ပြခုနှစ်တွင်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ရှိမရှိရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်။
ဘာသာရပ်များစမ်းသပ်ခြင်းရဲ့ start မှာ 32 နှင့် 275 ဂရမ်အကြားအလေးချိန် 300 အထီး Long-အီဗန်ကြွက် (ချားလ်စ်မြစ် Laboratories) တို့ဖြစ်သည်။ တိရိစ္ဆာန်များကသူတို့၏ 85% မှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည် ကြော်ငြာ libitum ကြွက်၏ 14 ဂရမ်မှကန့်သတ်အစာကျွေးအလေးချိန်နှင့်အစားအစာအမူအကျင့်ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းရရှိခဲ့သကြားလုံးလေးများအပြင်နေ့စဉ် Chow ။ ရေမရရှိနိုင်ခဲ့ ကြော်ငြာ libitum။ တိရစ္ဆာန်များ pair တစုံ-သျောခဲ့ကြသည်နှင့်အမှောငျမိုကျအချိန်ဇယား / တစ်ပြောင်းပြန် 21 ဇအလင်းအပေါ်အပူချိန်-controlled နဲ့ရာသီဥတုထိန်းချုပ်ထားသောကိုလိုနီအခန်းတစ်ခန်း (ကို C ° 12) တွင်ထားရှိမည် (ချွတ်ထွန်း, 8 လေး) ။ အားလုံးစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အိုးအိမ်အခြေအနေများတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်ကနေဒါကောင်စီနှင့်အညီရှိကြ၏အပေါင်းတို့နှင့်စမ်းသပ်ချက်ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ရဲ့တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုကော်မတီကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
စမ်းသပ်ခြင်းစီလေဝင်လေထွက်သံကို-attenuating ဝန်ကြီးအဖွဲ့ (Med Associates မှ) အတွင်းပူးတွဲရှစ်စံငါးပေါက်အော်ပရေတာအခန်းရာအရပျကိုယူ။ ငါးအညီအမျှလှပတဲ့ nosepoke aperture, သို့မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုတွင်းတွေရဲ့ array,2စင်တီမီတာအခနျးတစျခုသောမြို့ရိုးတစ်လျှောက်ဘားကြမ်းပြင်အထက်တည်ရှိခဲ့သည်။ တစ်ဦးက recessed လှုံ့ဆော်မှုအလင်းတစ်ဦးချင်းစီကို aperture ၏နောက်ကျောတွင်တည်ရှိသည်ခဲ့ nosepoke တုံ့ပြန်မှုချင်းစီတုန့်ပြန်အပေါက်၏အရှေ့ဘက်တလွှားဖြတ်သန်းနေတဲ့အလျားလိုက်အနီအောက်ရောင်ခြည်ရောင်ခြည်များကတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးအနီအောက်ရောင်ခြည်ရောင်ခြည်နှင့်ဗန်းအလင်းတပ်ဆင်ထားတစ်ဦးကအစားအစာကိုဗန်း, ဆန့်ကျင်ဘက်မြို့ရိုးပေါ်မှာတည်ရှိခဲ့သည်။ Sucrose လုံးလေးများ (45 မီလီဂရမ်, Bio-စားသုံးခြင်း) ပြင်ပတောင့်သာသနာကနေတဆင့်အစာအာဟာရကိုဗန်းမှကယ်နှုတ်ခဲ့သည်။ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ခရိုနီအစားအစာဗန်း၏တစ်ဖက်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးခဲ့ကြသည်။ ကုန်သည်များတစ် houselight မှတဆင့် illuminated နိုင်နှင့် software ကထိန်းချုပ်ထားခဲ့ CAW အားဖြင့် Med-PC ကို၌ရေးထားလျက်ရှိ၏, တစ်ဦးက IBM-သဟဇာတကွန်ပျူတာပေါ်မှာ run နေ။
တိရိစ္ဆာန်များကနဦး2နေ့စဉ် 30 မိအစည်းအဝေးများနှင့်အတူစမ်းသပ်အခန်းများမှ habituated ခဲ့ကြသည်။ ဤအအစည်းအဝေးများအတွင်းတုံ့ပြန်မှု aperture နှင့်အစားအစာဗန်းသကြားလုံးလေးများနှင့်အတူ baited ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆက်တွဲအစည်းအဝေးများအတွက်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အလငျးအတွင်းပိုင်း (ယခင်ကအသေးစိတ်ဖော်ပြထားခဲ့ပြီးအဖြစ်ငါးရွေးချယ်မှုအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်ဖျော်ဖြေဖို့လေ့ကျင့်ရေးကြွက်များအတွက်အသုံးပြုသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆင်တူ illuminated ခံခဲ့ရသည်အခါခါ aperture အတွက်တုံ့ပြန်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်Winstanley et al ။ , 2007, 2010) ။ အစာအားဖြင့်အစာကိုရရှိရန်ကြွက်များအား ၁၀ စက္ကန့်အတွင်းအလင်းပေးသည့် aperture ထဲသို့ nosepoke ပြုလုပ်ရန်လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးများသည်မိနစ် ၃၀ သို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုပေါင်း ၁၀၀ အထိကြာမြင့်ခဲ့ပြီးလှုံ့ဆော်မှုအလင်း၏ Spatial အနေအထားသည်စမ်းသပ်မှုများအကြားတွင်အတက်အကျကွဲပြားသည်။ ကြွက်များသည်တိကျမှန်ကန်သော aperture ကိုတိကျမှန်ကန်မှု ၈၀% နှင့်အထက်တုန့်ပြန်နိုင်ပြီးစမ်းသပ်မှု၏ <၂၀% ကိုချန်လှပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်တိရိစ္ဆာန်များသည်သတ်မှတ်ထားသောအချိုး (၁) အစီအစဉ်အရဆုလာဘ်အတွက်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည့်လီဗာများကိုတုံ့ပြန်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ အစည်းအဝေး ၃၀ တွင်တစ်ကြိမ်တည်းသာလီဗာတစ်ခုတင်သည်။ မိနစ် ၃၀ အတွင်းပြုလုပ်သောအချိန်တွင်တိရိစ္ဆာန်သည်လီဗာ ၅၀ ကျော်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်နောက်တစ်မျိုးကိုနောက်အစည်းအဝေးတွင်တင်ပြသည်။ ခရိုနီများတင်ပြသော (ဘယ် / ညာ) သည်အစီအစဉ်များကိုဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းညှိပေးသည်။
အလုပ်တခုကို Betting ။
တစ်ဦးကတာဝန်သိထားအတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည် ပုံ 1။ အလုပ်တခုကိုစတင်သည့်မီ, ခရိုနီအပြီးအပိုင် "မရေမရာ" "ဘေးကင်းလုံခြုံ" သို့မဟုတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြနှင့်ဤပုံစံဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီး counterbalanced ခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များပိုင်းတွင်တစ်ဦးတည်းသာလီဗာရုံးတင်စစ်ဆေးနှုန်းတိုးချဲ့ထားတဲ့အတွက်တာဝန်တစ်ခုအတင်းအကျပ်-ရွေးချယ်မှုဗားရှင်း 10 အစည်းအဝေးများဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးစမ်းသပ်မှုတွေဟာ illuminated အစားအသောက်ဗန်းထဲသို့ nosepoke တုံ့ပြန်မှုကနေတစ်ဆင့်စတင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုအောက်ပါတို့သည်ဗန်းအလင်းငွိမျးနှင့်တစ်, နှစ်, ဒါမှမဟုတ်ငါးပေါက်ခင်းကျင်းအတွင်းသုံးအလင်းအိမ်တွင်း 2, 3, ဒါမှမဟုတ်4အတွက် illuminated ခဲ့ကြသည်။ ခံခဲ့ရပါတယ် တင်ပြအလင်းအိမ်အရေအတွက်တစ်ခုချင်းစီကိုရုံးတင်စစ်ဆေးပေါ်လောင်းအရွယ်အစား equaled ။ ကြွက်ကြောင့်အတွင်းရှိအလင်းကို turn off စီ illuminated ကို aperture မှာ nosepoke တုံ့ပြန်မှုလုပ်ရန်လိုအပ်ခဲ့သည်။ လူအပေါင်းတို့သည်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအလင်းအိမ်ဒီထုံးစံ၌ပိတ်ထားခဲ့ပြီးတာနဲ့ခရိုနီအခနျးထဲသို့ဝဖြည့်စွက်ခဲ့သည်။ က "မရေမရာ" လီဗာပေါ်မှတုံ့ပြန်မှုနှစ်ဆရရှိနိုင်ပါဘေးကင်းလုံခြုံဆုလာဘ်သို့မဟုတ်ဘာမျှမတစ်ဦး 50% အခွင့်အလမ်းလြှော့သော်လည်းက "ဘေးကင်းလုံခြုံ" လီဗာအပေါ်တစ်ဦးကတုန့်ပြန်, wagered လုံးလေးများ၏နံပါတ်များ၏အာမခံပေးပို့ဖို့ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရွေးချယ်စရာများများ၏မျှော်လင့်ထားသည့် utility ကိုထို့ကြောင့်တန်းတူကြီးနှင့်မျှမတို့အသားတင်အားသာချက်အခြားအပေါ်မှာတယောက်ရွေးချယ်ရာတွင်၌ရှိ၏။ ဆုခခြံစမ်းသပ်မှုတွေတွင်, လုံးလေးများ၏သတ်မှတ်ထားသောအရေအတွက်အစားအသောက်ဗန်းသို့ထုတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်တုံ့ပြန်မှုနှစ်ခုခရိုနီတဦးအပေါ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းနှင့်အစားအသောက်ဗန်းမှာတုန့်ပြန်လာမယ့်တရားခွင်စတင်ပြီးနောက်မည်သို့ပင်ဆုလာဘ်ကိုအပ်ခဲ့ပါတယ်ရှိမရှိ၏, ထိုဗန်းအလင်း illuminated ခဲ့သည်။ 10 ့အတွင်းဖြစ်စေလီဗာအပေါ်တုံ့ပြန်ရန်ပျက်ကွက်တဲ့ရွေးချယ်မှုပျက်ကွက်အဖြစ်သွင်းယူသွားရုံးတင်စစ်ဆေးဖို့ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အလားတူပင် 10 ့အတွင်းအားလုံး illuminated ခါ aperture မှာတုံ့ပြန်ရန်ပျက်ကွက်အပေါက်တစ်ပေါက်ပျက်ကွက်အဖြစ်သွင်းယူသွားရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ပျက်ကွက်နှစ်ယောက်စလုံးအမှားများကိုချက်ချင်း5့အချိန်ထွက်ကာလအားဖြင့်အပြစ်ပေးခံခဲ့ရသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအချိန်-တနေရာစဉ်အတွင်း, အိမ်အလင်းအခနျး illuminated နှင့်မျှမတို့ဆုလာဘ်ရရှိခဲ့သည်နိုင်သို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုတွေစတင်ခဲ့သည်။ အချိန်ကိုထွက်ကာလအပြီးတွင်အဆိုပါဗန်းအလင်းတိရစ္ဆာန်အခြားစမ်းသပ်မှုစတင်နိုင်ခြင်းကိုညွှန်း, illuminated ခဲ့သည်။
အဆိုပါလောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်များအတွက်ရုံးတင်စစ်ဆေးဖွဲ့စည်းပုံမှာဖေါ်ပြခြင်းသိထားပုံ။ အဆိုပါကြွက်ဟာ illuminated အစားအသောက်ဗန်းမှာ nosepoke တုံ့ပြန်မှုအောင်နေဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီတရားခွင်စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဗန်းအလင်းထို့နောက်ငွိမျးခဲ့ပါတယ်နှင့် 1-3 တုံ့ပြန်မှုတွင်းအလောင်းအစားသို့မဟုတ်အာမခံ (1-3 သကြားလုံးလေးများ) ၏အရွယ်အစားမှာအချက်ပြ, illuminated ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦး illuminated ကို aperture မှာတစ်ဦးက nosepoke တုံ့ပြန်မှုကြောင့်အတွင်းရှိအလင်းပိတ်ထား။ လူအပေါင်းတို့သည်ကို aperture အလင်းအိမ်ဒီထုံးစံ၌ငွိမျးခဲ့ပြီးတာနဲ့နှစ်ခုခရိုနီကြွက်မှပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။ လုံခြုံလီဗာ၏ရွေးချယ်ရေးအမြဲအာမခံ၏ပေးပို့ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသော်လည်း, ထိုအာမခံသို့မဟုတ်ဘာမျှလက်ခံရရှိဖြစ်စေနှစ်ဆ 50 အခွင့်အလမ်း: အမရေမရာလီဗာ၏ရွေးချယ်ရေးတစ် 50 ခဲ့သည်။ ကြွက် 10 ့အတွင်းခရိုနီတဦးရွေးချယ်ဖို့ပျက်ကွက်လျှင်ရုံးတင်စစ်ဆေးနေတဲ့ရှေးခယျြမှုပျက်ကွက်အဖြစ်သွင်းယူပေးခဲ့သည်။ ကြွက် 10 ့အတွင်းတစ်ဦးချင်းစီ illuminated တုံ့ပြန်မှုအပေါက်မှာတုံ့ပြန်ရန်ပျက်ကွက်လျှင်ထိုနည်းတူစွာ, တရားခွင်အပေါက်တစ်ပေါက်ပျက်ကွက်အဖြစ်သွင်းယူပေးခဲ့သည်။
တစ်ခုချင်းစီကို session တစ်ခု 12 စမ်းသပ်မှုတစ်ခုချင်းစီ၏လုပ်ကွက် 10 ပါဝင်သည်။ အလောင်းအစားအရွယ်အစားသည်တစ်ခုချင်းစီအတွင်းရှိစဉ်ဆက်မပြတ်တည်ရှိနေသော်လည်းအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းအလောင်းအစားအရွယ်အစား၏လေးခုကိုသေချာစေသည့်နေရာတစ်ခုနှင့်ကွဲပြားသည့်လုပ်ကွက်များအကြားကွဲပြားမှုရှိသည်။ သို့သော်ထိုပမာဏသည်အတူတူပင်လောင်းအရွယ်၏ ၂ ခုဆက်တိုက်ဖြစ်သည်။ လုပ်ကွက်တစ်ခုစီ၏ပထမ ဦး ဆုံးစမ်းသပ်မှု ၄ ခုသည်အတင်းအကြပ်ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလုံခြုံမှု (စမ်းသပ်မှု ၂ ခု) (သို့) မသေချာမရေရာသော (၂ ခုစမ်းသပ်မှု) လီဗာကိုကျပန်းအလို့ငှာကျပန်းအစီအစဉ်ဖြင့်တင်ပြခဲ့ပြီး၊ ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုလုံးမှရွေးချယ်ထားသောနှစ်မျိုးလုံးမှလက်ရှိအရေးပေါ်အခြေအနေနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိခဲ့သည်။ ပြဇာတ်၌။ စမ်းသပ်မှုပေါင်း ၁၂၀ လုံးမပြီးဆုံးမှီအထိသင်တန်းများသည်အများဆုံး ၃၀ မိနစ်အထိဖြစ်သည်။
တိရစ္ဆာန်များတစ်ပတ်ကိုငါးနေ့စဉ်အစည်းအဝေးများလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်တစ်ဦးကစာရင်းအင်းတည်ငြိမ်ပုံစံကိုငါးအစည်းအဝေးများ (အပြုအမူတည်ငြိမ်မှု, 46-54 မှစုစုပေါင်းအစည်းအဝေးများ) ကျော်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအားလုံး variable တွေကိုဖြတ်ပြီးလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်သည်အထိစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များအတွက် 120 မိအချိန်ကန့်သတ်အတွင်း 30 စမ်းသပ်မှုတွေဖြည့်စွက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။
တည်ငြိမ်သောအမူအကျင့်အခြေခံထူထောင်ခဲ့ပြီးတာနဲ့အောက်ပါဒြပ်ပေါင်းများ၏သက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်: အ psychostimulant d-amphetamine (0, 0.3, 1.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်), အ DA: D2 /3အဲဒီ receptor ရန် eticlopride (0, 0.01, 0.03, 0.06 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ကို၎င်း, DA: D1 အဲဒီ receptor ရန် R(+)-7-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine Hydrochloride (SCH 23390; 0, 0.001, 0.003, 0.01 / ကီလိုဂရမ် mg) ။ (မူးယစ်ဆေးဝါး (ABCD, BDAC, CABD, DCBA ဆေးများ A-D ကိုများအတွက်) digram-မျှမျှတတလက်တင်-စတုရန်းဒီဇိုင်းများတစ်စီးရီးသည်နှင့်အညီအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်Cardinal နှင့် Aitken, 2006) ။ မူးယစ်ဆေးထိုးတဲ့အခြေခံ session တစ်ခုနှင့်အတူစတင်တစ်ဦး3ဃသံသရာအပေါ်ပေးထားခဲ့ကြသည်။ အောက်ပါနေ့ရက်တွင်, မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်ဆားစမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီ 10 မိအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတော့မှာပါ။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ တိရစ္ဆာန်များ re-တည်လိမ့်ရန်တည်ငြိမ်မူအကျင့်အခြေခံခွင့်ပြုထိုး၏တစ်ဦးချင်းစီစီးရီးများအကြားကအနည်းဆုံး 1 တစ်ပတ်မူးယစ်ဆေးအခမဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသဖြင့်, ဒြပ်ပေါင်းများကိုမဆိုရန်ထိတွေ့မှုအပြုအမူအပေါ်ရေရှည်သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ဘူးသေချာစေရန်။
အားလုံးမူးယစ်ဆေးဆေးများဆားအဖြစ်တွက်ချက်ခြင်းနှင့် 0.9% မြုံဆားအတွက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ အားလုံးမူးယစ်ဆေးဝါး intraperitoneal လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်နေ့စဉ်လတ်ဆတ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ d-ဖက်တမင်းဆေးပြား sulfate Sigma-Aldrich ကနေကျန်းမာရေးကနေဒါခြွင်းချက်အောက်တွင်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ SCH 23390 နှင့် eticlopride Hydrochloride Tocris Bioscience ထံမှဝယ်ယူခဲ့သည်။
ကြွက်တစ်အဖွဲ့ခွဲများတွင် (n = 9), D ကို2 /3အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်သိပ်သည်းဆပေနှင့် autoradiography မှတဆင့်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးကြွက်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူအတွက်မဆိုရေရှည်အပြောင်းအလဲများမှဦးဆောင်မပေးဖူးကြောင်းသေချာစေရန်ပြီးခဲ့သည့်မူးယစ်ဆေးစိန်ခေါ်မှုအောက်ပါတစ်ပါတ်အဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များပြီးတော့သူတို့ရဲ့နေအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာနက (ပြီးခဲ့သည့်အပြုအမူဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှု session တစ်ခုပြီးနောက် 20-46 ဃ) ပေစကင်ကိုလုပ်ဆောင်မှဖြစ်နိုင်သမျှခဲ့သည်အထိတစ်နေ့လျှင်အစားအစာ 212 ဆကျွေးမွေးခဲ့ကြသည်။
ပေလေ့လာမှုများ (က Siemens Micro-ပေအာရုံစိုက် F120 ကင်နာအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြLaforest, 2007), ~1.8 မီလီမီတာ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိပါတယ်ရာ3။ ကြွက်ဟာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်လျှောက်လုံး 2.5% isofluorane မေ့ဆေးအောက်မှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ဂီယာအချက်အလက်များ၏ခြောက်မိနစ်အတွင်းတစ်ဦးနှင့်အတူစုဆောင်းခဲ့ကြ 57Co. , ကို attenuation နှင့်ကြဲဖြန့်ပြင်ဆင်ချက်များ၏တွက်ချက်မှုခွင့်ပြုရင်းမြစ်။ [၏သွေးကြောသွင်းဆေးထိုးအောက်ပါ11ကို C] raclopride (1.02 ± 0.02 μCi / g; တိကျတဲ့လှုပ်ရှားမှု,> 4000Ci / mmol), ထုတ်လွှတ်အချက်အလက်များ၏ 1 ဇစုဆောင်းခဲ့သည်။ အချက်အလက်များကို6× 30 s,2× 60 s,5× 300 s,2× 450 s,2× 480 s frames များကိုသို့ histogrammed အဖြစ်နဲ့ Fourier rebinning နှင့် filtered backprojection ဖြင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းကာလအတွင်းပုံမှန်ဖြစ်ခြင်း၊ ပြန့်ပွားခြင်းနှင့် attenuation များကိုပြင်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အကျိုးစီးပွား rectangular ဒေသများ (ROIs) သုံးပုံရိပ်ချပ် (2.6 × 3.5 × 2.4 မီလီမီတာ) ဖြတ်ပြီး dorsal striatum ပေါ်နှင့်သုံးပုံရိပ်ချပ် (6.9 × 2.6 × 2.4 မီလီမီတာ) ဖြတ်ပြီး cerebellum အပေါ်မြန်မာနိုင်ငံသထားကြ၏။ တစ်ခုကဘယ်ဘက် striatum များအတွက်ပျမ်းမျှအားအချိန်လှုပ်ရှားမှုကွေး, ညာ striatum နှင့် cerebellum ကဤ ROIs ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ခဲ့ကြသည်။ ယင်းသော graphical Logan နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်း (Logan, 1996), အစညျးအလားအလာ (BPND) တစ်ဦးကိုကိုးကားဒေသအဖြစ် cerebellum သုံးပြီးလက်ဝဲနှင့်လက်ယာ striatum ဘို့တွက်ချက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ PET scan ကပြီးစီးခဲ့ကြောင်းတစ်ခုမှာနှစ်ခုမှနာရီသည်နောက်, တစ်ဦးချင်းစီတိရိစ္ဆာန်ယင်းသို့ခေါင်းဖြတ်စီရင်ခြင်းနှင့် isopentane အတွက်အေးခဲဦးနှောက်ကိုဖယ်ရှားမှတဆင့်ဦးသေဆုံးပြီးနှင့် -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ပါတယ်။ ဦးနှောက်ဟာစုဆောင်းပေဒေတာကဲ့သို့တူညီသောဝင်ရိုးတလျှောက် 16 μm Coronal ကဏ္ဍများသို့လိုက်သည်ကိုများနှင့်ဖန်ဆလိုက်ပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ dorsal striatum (anterior, medial နှင့် posterior) မှကဏ္ဍများခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ : D ကိုတိုင်းတာရန်2 /3အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု, ဆလိုက် [3 nm နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်11ကို C] စုစုပေါင်းစည်းနှောင်ဆုံးဖြတ်ရန် raclopride, ဒါမှမဟုတ်3nm အရောအနှော [11ကို C] raclopride နှင့် 10 μm (+) - nonspecific စည်းနှောင်ဆုံးဖြတ်ရန် butaclamol ။ စံခါးဆစ် [Serial တစ်ဦးဟုလူသိများငွေပမာဏ diluting ကပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်11ကို C] raclopride နှင့်စက္ကူ၏သေးငယ်တဲ့အပိုင်းအစပေါ်သို့တစ်ဦးချင်းစီ dilution ကနေတစ်စက် pipetting (Strome, 2005) ။ ပေါက်ဖွားနောက်တွင်ထိုဆလိုက်များနှင့်စံခါးဆစ်2ဇများအတွက် radiosensitive ဖော့စဖရပ်ဖန်သားပြင်မှအခြောက်နှင့်အ apposed ခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားဖန်သားပြင်ထို့နောက်ဆိုင်ကလုန်းဖော့စဖရပ်ပုံရိပ်စနစ်အား အသုံးပြု. ဖတ်ကြားခဲ့ကြသည်။ ရရှိလာတဲ့ optical ထုစံခါးဆစ်ကနေတဆင့် pmol / ml ကိုကူးပြောင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ PET ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများတွင်အသုံးပြုသူတို့အားကဲ့သို့တူညီသော In-လေယာဉ် (သို့မဟုတ် In-အချပ်) ဧရိယာနှင့်အတူ rectangular ROIs အဆိုပါ imaged ချပ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် striatum အပေါ်ထားရှိခဲ့ကြသည်။ ROIs လည်းနှစ်နိုင်ငံဘဲဥပုံ၏နျူကလိယ accumbens (ဧရိယာ, 2.5 မီလီမီတာ၌ထားကြ၏2), medial prefrontal cortex (နှစ်နိုင်ငံဘဲဥပုံ၏ဧရိယာ, 2.0 မီလီမီတာ2) နှင့်စတုဂံ၏ orbitofrontal cortex (ဧရိယာ, 3.4 မီလီမီတာ ventrolateral2) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုဒေသတစ်တစ်ခုတည်းစည်းနှောင်တိုင်းတာခြင်းပေးထားသောရွယ်အားလုံးကိုသက်ဆိုင်ရာတစ်သျှူးချပ်ဖြတ်ပြီးတိုင်းတာ optical သိပ်သည်းဆပျမ်းမျှနှင့် pmol / ml ကိုစံကွေး data တွေကိုသုံးပြီးဖို့ပြောင်းလဲနေဖြင့်အစီရင်ခံခဲ့သည်။ အလားတူနည်းလမ်း D ကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုခဲ့သည်1 [နဲ့အတူအဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု3H ကို] SCH 23390 (PerkinElmer), [ကြောင့်စီးပွားရေးအရရရှိနိုင်သောချွင်းချက်နှင့်အတူ3H ကို] microscales (GE Healthcare) ကိုတိုင်းတာ optical ထုပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
အမူအကျင့် data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
အားလုံးအမူအကျင့်စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း SPSS (ဗားရှင်း 16, IBM က) ကို အသုံးပြု. ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အစားမသေချာမရေရာလီဗာ၏ရွေးချယ်မှု၏အကြွင်းမဲ့အာဏာအရေအတွက်ထက်ရာခိုင်နှုန်းရွေးချယ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း confounding ထံမှပြီးစီးခဲ့စမ်းသပ်မှုတွေ၏နံပါတ်အတွက်မဆိုမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ [(ရှေးခယျြသောကြိမ်မသေချာမရေရာလီဗာအရေအတွက်) / (စမ်းသပ်မှုတွေ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်က)] 100 ×: အမရေမရာလီဗာတစ်ဦးချင်းစီလောင်းအရွယ်အစားဘို့ရွေးကောက်ခဲ့သည့်အပေါ်စမ်းသပ်မှုတွေ၏ရာခိုင်နှုန်းထို့ကြောင့်အောက်ပါပုံသေနည်းအရသိရသည်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာ arcsine ကိုမဆိုအတုမျက်နှာကျက်သက်ရောက်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ 100%) minimize လုပ်ဖို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမတိုင်မီအသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ အပေါက်ပျက်ကွက်၏နံပါတ်, ရှေးခယျြမှုပျက်ကွက်၏နံပါတ်တစ်လီဗာ, အစားအစာဗန်းမှာဆုလာဘ်စုဆောင်းဖို့အောင်းနေချိန်နှင့် session တစ်ခုနှုန်းပြီးစီးစမ်းသပ်မှုတွေ၏နံပါတ်ကိုရှေးခယျြဖို့အောင်းနေချိန်: ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်အခြားတိုင်းတာသည်အောက်ပါခဲ့ကြသည်။ အတွင်း-ဘာသာရပ်များအချက်များအဖြစ်: များနှင့်အလောင်းအစားအရွယ်အစား (5-1 သကြားလုံးလေးများ5အဆင့်ဆင့်): ငါးအစည်းအဝေးများအနှံ့တည်ငြိမ်အခြေခံအပြုအမူထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ session တစ်ခုနှင့်အတူတိုင်းတာအားလုံး variable တွေကိုအဘို့အ ANOVA (အစည်းအဝေးများ 3-13အဆင့်ဆင့်) ကနေတဆင့်ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးကတတိယအတွင်း-ဘာသာရပ်များအချက်, လီဗာရွေးချယ်မှု (2 အဆင့်ဆင့်: လုံခြုံမသေချာ) လည်းမသေချာမရေရာလီဗာ၏ရာခိုင်နှုန်းရွေးချယ်မှု မှလွဲ. အားလုံး variable တွေကိုများအတွက်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ တစ်ဦးအတွင်း-ဘာသာရပ်များအချက်အဖြစ်: (အစည်းအဝေးများ 5-15အဆင့်ဆင့်) ပြီးစီးခဲ့စမ်းသပ်မှုတွေအရေအတွက်ကိုလည်း session တစ်ခုနှင့်အတူတိုင်းတာအားလုံး variable တွေကိုအဘို့အထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ ANOVA ကနေတဆင့်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောအလောင်းအစားအရွယ်အစားလုပ်ကွက်တင်ပြခဲ့ကြသည်သောအမိန့်အတွင်း-The-တာဝန်ဒီဇိုင်းအတွက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်ထို့ကြောင့်တစ်ဦးအပိုဆောင်းအချက်အဖြစ်ထည့်သွင်းမခံ, ပိတ်ပင်တားဆီးမှု sequence ကိုအပြုအမူလွှမ်းမိုးခဲ့သည်ဆိုပါကနေ့နေ့ကကွဲပြားလိမ့်မယ်, အဲဒီနောက်အစည်းအဝေးများအနှံ့လောင်းအရွယ်အစားကိုက်ညီသက်ရောက်မှုကြည့်ဖို့မဒေတာအဖြစ်ကစာရင်းအင်းတည်ငြိမ်အပြုအမူရောက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီတိရိစ္ဆာန်များသူတို့ရဲ့အာမခံ sensitivity ကိုအတွက်သိသိသာသာကွဲပြားသောဤအခြေခံအချက်အလက်များ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစဉ်အတွင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ ကြွက်ထို့ကြောင့်တစ်ဦး linear ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်အခြေခံပြီးအုပ်စုနှစ်စုခွဲခဲ့ကြသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအာမခံ sensitivity ကိုတစ်အနည်းကိန်းအတိုင်းအတာတစ်ခုစီကိုကြွက်များအတွက်ရရှိခဲ့သညျ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအလောင်းအစားအရွယ်အစားမှာမသေချာမရေရာ option ကို၏ရွေးချယ်မှုငါးယခင်အခြေခံအစည်းအဝေးများဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှနှင့်ပုံစံတစ်ခုညီမျှခြင်းကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် Microsoft Excel ကိုအတွက်ကြံစည်ခဲ့သည် က y = MX + c ကိုယင်းအချက်ရသော m လိုင်းများ၏ gradient ကို (ထိုအန္တရာယ်များ option ကိုရှေးခယျြမှုတိုးပွားလာအလောင်းအစားအရွယ်အစားတစ် function ကိုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားရာမှဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါဒီဂရီ) ဖော်ပြသည်။ ဒါဟာဂုဏ်ထူးတစ်ဦးအကြား-ဘာသာရပ်များအချက် (အုပ်စု2အဆင့်ဆင့်) အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ယခု မှစ. အားလုံး ANOVAs သို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ pharmacological စိန်ခေါ်မှုများကနေဒေတာတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးဆေးထိုးနှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ ANOVAs သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည် [4 အဆင့်ဆင့်: မော်တော်ယာဉ်ပေါင်းဝင်း၏3ဆေးများ (3 အဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့ရာစိတ်ကြွဆေး၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ: မော်တော်ယာဉ်ပေါင်းဝင်း၏2ဆေးများ)] နှင့်အလောင်းအစားအရွယ်အစားအဖြစ်အတွင်း တစ်ဦးအကြား-ဘာသာရပ်များအချက်အဖြစ်အချက်များနှင့်အုပ်စုတစ်စု -subjects ။ အားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, မည်သည့်သိသာထင်ရှားသော (ခုနှစ်တွင်p <0.05) အဓိကသက်ရောက်မှုတက်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည် post ကို hoc တလမ်းတည်းဖြင့် ANOVA သို့မဟုတ်ကျောင်းသား၏ကိုသုံးနိုင်သည် t စမ်းသပ်မှုများ။ ဒေတာတန်ဖိုးများကိုစာသား၌ပေးသောအခါ, SEM ±ယုတ်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။
D2 /3binding striatal နှင့်အာမခံ sensitivity ကို။
ဒါဟာအပေါငျးတို့သကြွက်အပေါ် PET Scan ဖတ်ဖျော်ဖြေဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကိုး, pseudorandomly တစ်ဖွဲ့လုံးကအုပ်စုတွင်မွေးရာပါအဆိုပါအပြောင်းအလဲ၏ကိုယ်စားလှယ်ခဲ့၏အပြုအမူကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။ ANOVAs ကစာရင်းအင်း, ဒီအဖွဲ့ခွဲ၏အပြုအမူကိုသိသိသာသာစမ်းသပ်မှု၏သင်တန်းဖြတ်ပြီးဆောင်များတွင်၏ကျန်ရှိသော၏ကှာခွားမပြုခဲ့ကြောင်းသေချာစေရန်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အတွင်း-ဘာသာရပ်များအကြောင်းအချက်များအပေါင်းထားတဲ့အပိုဆောင်းအကြား-ဘာသာရပ်များ variable ကိုအဖြစ် session တစ်ခုနှင့်အလောင်းအစားအရွယ်အစားနှင့်အတူအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့မီနှင့်ရှိသမျှသော pharmacological စိန်ခေါ်မှုများအောက်ပါနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပေါ်ငါးခုအခြေခံအစည်းအဝေးများကနေရှေးခယျြမှုဒေတာ, ANOVA အားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်: scan ဖတ်ပေအုပ်စုတစ်စု (2 အဆင့်ဆင့်နှင့် ) scan ဖတ်မရ။ အာမခံ sensitivity ကိုအဆင့်သည်ဤအခြေခံအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းပြသရာမှအဆိုပါဒီဂရီ: D များ၏ရရှိနိုင်မှုခန့်မှန်း2 /3ကို BP မှတဆင့်တိုင်းတာအဖြစ် dorsal striatum အတွက် receptors,NDထို့နောက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ : D ၏သိပ်သည်းဆအကြားဆက်ဆံရေး1 သို့မဟုတ်: D2 /3အဆိုပါ dorsal striatum အတွက် receptors, autoradiography ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်ကိုလည်းအာမခံ sensitivity ကိုတစ်ဦးခန့်မှန်းချက်အဖြစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ သောပေနှင့် autoradiography ဒေတာဆက်နွယ်နေကြောင်းဖို့ဒီဂရီလည်းစိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါလောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်၏ baseline စွမ်းဆောင်ရည်ကို
ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျအဘယ်သူမျှမအကောင်းဆုံးမဟာဗျူဟာလောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်ရှိခဲ့ပါသည်: ဖြစ်စေ option ကိုသီးသန့်ရွေးချယ်မှုမဆို သာ. ကြီးမြတ်သို့မဟုတ်ပြောင်ဆုလာဘ်လိုက်လျောခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်သတ္တဝါများကိုအခြားအပေါ်မှာတယောက် option ကိုများအတွက်သိသာထင်ရှားသောဦးစားပေးပြသ, ဤဦးစားပေး (ပြဇာတ်အတွက်အလောင်းအစားအရွယ်အစားအားဖြင့် modulated ခဲ့ကြသည်သဖန်းသီး။ 2a; အလောင်းအစားအရွယ်အစား: F(2,60) = 32.498, p <0.0001) ။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောကြိုက်နှစ်သက်သောအသုံးအနှုန်းများတွင်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုရှိသည်ဟုမှတ်ယူပြီးထိုအလောင်းအစားအရွယ်အစားတိုးလာသည်နှင့်အမျှတိရိစ္ဆာန်များသည်မသေချာမရေရာသည့်လီဗာနှင့်ကွာဝေးသောမျဉ်းကြောင်းကိုဒီဂရီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်တိရစ္ဆာန်များသည်၎င်းတို့၏ခံစားနိုင်စွမ်းအပေါ် အခြေခံ၍ အုပ်စုနှစ်စုခွဲထားသည်။m ညီမျှခြင်းအတွက် y = MX + ခ; , -5.06 ± 10.50 ဆိုလို; သဖန်းသီး။ 2b) ။ တစ်ဦးခြင်းဖြင့်သရုပ်ပြတိုးလာသည့်အာမခံအဖြစ်ပိုလုံခြုံလီဗာကို ရွေးချယ်. တိရစ္ဆာန်များ m တစ်သီအိုရီ 1 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော≥0 SD ကတန်ဖိုးအာမခံထိခိုက်မခံတဲ့ (အဖြစ်ခွဲခြားခဲ့သည်n = 10), ရှိသမျှသည်အခြားသောတိရိစ္ဆာန်များကိုအာမခံထုံထို (ကဲ့သို့သောခွဲခြားခဲ့ကြသည်သော်လည်းn = 22) (အလောင်းအစားအရွယ်အစား-အုပ်စုတစ်စု: F(2,60) = 37.783, p <0.0001; အလောင်းအစားမတူသောကစားနည်းအရွယ်အစား - F(2,42) = 3.309, p = 0.06; အာမခံ-အထိခိုက်မခံအလောင်းအစားအရွယ်အစား: F(2,18) = 57.596, p <0.0001; အလောင်းအစားအရွယ်အစား ၁ နှင့် ၂ က F(1,9) = 13.298, p = 0.005;2vs 3: F(1,9) = 114.551, p <0.0001) ။ အလောင်းအစားအရွယ်အစားသည်ရွေးချယ်မှုကိုလွှမ်းမိုးရန်လမ်းကြောင်းရှိသော်လည်းလောင်းကစားအရွယ်အစား ၂ တွင်မရေရာသေးသောရွေးချယ်မှုရွေးချယ်မှုကိုအနည်းငယ်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အဓိကအားဖြင့်ကမကထပြုမှုပြုသည် wager- အထိခိုက်မခံတိရိစ္ဆာန်များအားဖြင့်သရုပ်ပြမသေချာမရေရာရွေးချယ်မှုအတွက် linear ကျဆင်းခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်တော့ wager sensitivity ရဲ့ဒီဂရီဟာမသေချာမရေရာတဲ့လီဗာ၏စုစုပေါင်းရွေးချယ်မှုနှင့်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။r2 = 0.522, p = 0.002) ။ သို့သျောလညျးပဲယေဘုယျတဦးတည်းလီဗာများအတွက် preference ကိုသို့မဟုတ်အခြားထက်ပိုဖမ်းမိအာမခံထုံထိုနှိုင်းယှဉ်ထိခိုက်မခံတဲ့အာမခံအဖြစ်ကြွက်များ၏ခွဲခြားခြင်း, အုပ်စုနှစ်စု၏ရှေးခယျြမှုအပြုအမူအတွက်အသေးငယ်ဆုံးလောင်းကြေးအရွယ်အစားမှာချွတ်စွပ်အရွယ်အစားခဲ့ပေမယ့်အာမခံ-အထိခိုက်မခံကြွက်ဟာသူတို့ရဲ့လျော့နည်းသွားအဖြစ်ဆိတ်ကွယ်ရာဆွဲ : အလောင်းအစားအရွယ်အစားတိုးလာ (အလောင်းအစားအရွယ်အစား 1 အုပ်စုတစ်စုအဖြစ်မရေမရာ option ကိုဦးစားပေး F(1,27) = 1.759 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ; အလောင်းအစားအရွယ်အစား2အုပ်စုတစ်စု: F(1,27) = 10.681, p = 0.003; အလောင်းအစားအရွယ်အစား3အုပ်စုတစ်စု: F(1,27) = 23.406, p <0.0001) ။
ကြွက်ဟာမသေချာမရေရာအကျိုးသည် preference ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုပြ, ဤစိတ်ကြွဆေးနှင့် eticlopride ဖို့တုန့်ပြန်ဆုံးဖြတ်သည်။ aအလောင်းအစားအရွယ်အစားတိုးမြှင့်အဖြစ်အာမခံ-ထုံထိုကြွက်၏ရှေးခယျြမှုပုံစံမပြောင်းခဲ့ဘူးသော်လည်း, အာမခံ-အထိခိုက်မခံကြွက်, သူတို့ရဲ့ preference ကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားလေသည်။ bအဆိုပါ gradient ကိုအားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်, အာမခံ sensitivity ကို၏ဒီဂရီ (စီကြွက်အားဖြင့်ပြသm) အလောင်းအစားအရွယ်အစားဆန့်ကျင်မသေချာမရေရာလီဗာ၏ရွေးချယ်မှုကြံစည်ခြင်းဖြင့်ရရှိသောလိုင်း၏။ c, d, ဖက်တမင်းဆေးပြား (အာမခံ-အထိခိုက်မခံအတွက်မသေချာမရေရာ option ကိုရှေးခယျြမှုတိုးလာc) သော်လည်းမအာမခံ-ထုံထိုကြွက်များ (d). e, fဆန့်ကျင်ဘက်မှာတော့ eticlopride (အာမခံ-အထိခိုက်မခံကြွက်မသက်ရောက်ခဲ့e), ဒါပေမယ့်အာမခံ-ထုံထိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်မသေချာမရေရာရှေးခယျြမှုလျော့နည်းသွား (f) ။ ပြသဒေတာကို SEM ±အတောအတွင်းရှိပါတယ်။
: နှစ်ဦးစလုံးအာမခံ-အထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်အာမခံ-ထုံထိုတိရိစ္ဆာန်များမသက်ဆိုင်အလောင်းအစားအရွယ်အစား (ရွေးချယ်မှု, အလုံခြုံလီဗာကျော်မသေချာမရေရာရွေးဖို့မြန်ခဲ့ကြ F(1,28) = 11.238, p = 0.002; အုပ်စုတစု: F(1,28) = 0.863 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ; ဘေးကင်းလုံခြုံ SEM, ±ရွေးချယ်မှုအောင်းနေချိန်ဆိုလို: 1.58 ± 0.03; SEM, 1.40 ±မသေချာမရေရာ 0.03) ±ရွေးချယ်မှုအောင်းနေချိန်ဆိုလို။ : စာရင်းအင်းများအပေါင်းတို့, တိရိစ္ဆာန်များလည်းအလောင်းအစားအရွယ်အစားတိုးလာ (အလောင်းအစားအရွယ်အစားအတိုင်းဆုလာဘ်စုဆောင်းဖို့မြန်ခဲ့ကြ F(2,56) = 16.445, p <0.0001; အလောင်းအစားအရွယ်အစား - အုပ်စု F(2,56) = 0.015 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ; 1 vs အလောင်းအစားအရွယ်အစား 2: F(1,28) = 12.493 p <0.001; အလောင်းအစားအရွယ်အစား ၁ နှင့် ၂ က F(1,28) = 16.521, p <0.0001) သို့သော်အပြောင်းအလဲများ၏ပမာဏသည်အနည်းဆုံးဖြစ်သော်လည်း (အလောင်းအစားအရွယ်အစား ၁ - ၀.၄၂ - ၀.၆၆ စ; အလောင်းအစားအရွယ်အစား ၂ - ၀.၄ - ၀.၅၅ စ; အလောင်းအစားအရွယ်အစား - ၃: ၃၃၉ - ၀.၅၅ စ) ။ တိရိစ္ဆာန်များအားလုံးသည်အလားတူစမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီကိုပြီးစီးခဲ့သည် (wager sensitive, 1 ± 0.42; wager sensitive, 0.006 ± 2; group: F(1,30) = 0.770 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ) ။ အဓိပ္ပါယ်ရှိသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကြောင့် null တန်ဖိုးများ (:; ရှေးခယျြမှုပျက်ကွက်, 0.006 ± 0.0004 ပေါက်ပျက်ကွက်, 0.44 ± 0.06 အားလုံးကြွက်များ) ပါဝင်တဲ့ဆဲလ်တွေ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်လျော့ခဲ့ session တစ်ခုနှုန်းလုပ်နိုင်အောင်, အနည်းငယ်မျှသာပျက်ကွက်ရှိခဲ့သည်။
ဖက်တမင်းဆေးပြားသိသိသာသာအာမခံ-အထိခိုက်မခံအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွက်မသေချာမရေရာ option ကိုရှေးခယျြမှုတိုးမြှင့်သော်လည်း, (ထိုအာမခံ-ထုံထိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ရွေးချယ်မှုအပြုအမူမထိခိုက်ခဲ့ပါသဖန်းသီး။ 2c,d; အုပ်စုတစု: F(1,30) = 6.560, p = 0.0016; ထိုး: F(2,60) = 5.056, p = 0.009; ဆေးထိုးရန်အထိခိုက်မခံအာမခံ: F(2,18) = 6.483, p = 0.008; ဆေးထိုးဖို့အာရုံမခံစားနိုင်သောအာမခံ: F(2,42) = 0.806 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ; အာမခံအထိခိုက်မခံ: 0.3 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်စိတ်ကြွဆေး vs ဆား; F(1,9) = 3.647, p = 0.088; 1.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်စိတ်ကြွဆေး vs ဆား: F(1,9) = 13.307, p = 0.005) ။
: ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုအမြင့်ဆုံးထိုး (ဆေးထိုးမှာသာထငျရှားခဲ့ပေမယ့်ဖက်တမင်းဆေးပြား, ရွေးချယ်မှု latency တိုးလာ F(2,56) = 13.363, p <0.0001; ၀.၆ မီလီဂရမ်၊ F(1,28) = 0.019 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ; 1.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်စိတ်ကြွဆေး vs ဆား: F(1,28) = 13.719) ။ : သူတို့ကမသေချာမရေရာလီဗာ (ရွေးချယ်မှုအပေါ်တုံ့ပြန်ရန်မြန်ခဲ့ကြသည်မထွက်ရတိရစ္ဆာန်များ၏နှစ်ဦးစလုံးစုံကိုအခြေခံမှာတှေ့မွငျရတုံ့ပြန်၏တူညီသောပုံစံပြသ F(1,28) = 8.024, p = 0.008; ဘေးကင်းလုံခြုံ, 1.93 ± 0.19; မရေမရာ, 1.66) 0.04 ±။ : ဆုလာဘ်စုဆောင်းဖို့အောင်းနေချိန်စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေး (ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်မထိခိုက်ခဲ့သည် F(2,42) = 1.106 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ; ထိုး-ရွေးချယ်မှု-အုပ်စုတစ်စု: F(2,42) = 0.623, သိသိသာသာမပါ), ဒါပေမယ့်အမြင့်ဆုံးထိုး (အာမခံအထိခိုက်မခံ, 0.40 ± 0.18 လုပ်ရွေးချယ်မှုပျက်ကွက်၏နံပါတ်တိုးတက်သဖြင့်, အာမခံအာရုံမခံစားနိုင်သော, 0.53 ± 0.16; ထိုး: F(2,60) = 5.264, p = 0.029; 1.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်စိတ်ကြွဆေး vs ဆား: F(1,30) = 5.263, p = 0.029) ။ : အပေါက်ပျက်ကွက်စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေး (ဆေးထိုးအောက်ပါမထိခိုက်ခဲ့သည် F(2,60) = 2.344, p = 0.105; အုပ်စုတစု: F(1,30) = 0.623 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ) ။ ; ထုံထိုအာမခံ, 1.0 ± 118.9; အာမခံအထိခိုက်မခံ, 1.1 ± 112.5 ထိုး: စိတ်ကြွဆေးများပိုမိုမြင့်မားထိုးပြီးစီးစမ်းသပ်မှုတွေ၏နံပါတ်လျော့အားထင်ရှားပေမယ့်ဆားအုပ်ချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုအရေးပါမှု၏တိုတောင်းသောကျဆင်း, (4.59 / ကီလိုဂရမ်စိတ်ကြွဆေး mg: F(2,60) = 2.616 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ; 1.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်စိတ်ကြွဆေး vs ဆား: F(1,30) = 2.066 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ) ။
အဆိုပါလောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် eticlopride အုပ်ချုပ်ရေးဆိုးကျိုးများ
အများဆုံးဆေးထိုးသည့်အချိန်တွင် eticlopride သည်စမ်းသပ်မှုအားလုံး၏ ၅၀% ကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဤဆေးကိုနောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်မပါရှိပါ။
Eticlopride အာမခံ-ထုံထိုကြွက်များအတွက်မသေချာမရေရာလီဗာ၏ရှေးခယျြမှုလျှော့ချ, သေးသော (အာမခံ-အထိခိုက်မခံတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ရွေးချယ်မှုအပြုအမူပြောင်းလဲပစ်ဘူးသဖန်းသီး။ 2e,f; ထိုး-အုပ်စုတစ်စု: F(2,60) = 2.729, p = 0.073; ထိုး-အုပ်စုတစ်စု-အလောင်းအစားအရွယ်အစား: F(4,120) = 2.821, p = 0.028; ဆေးထိုးရန်အထိခိုက်မခံအာမခံ: F(2,18) = 0.405 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ; ဆေးထိုးဖို့အာရုံမခံစားနိုင်သောအာမခံ: F(2,42) = 5.250, p <0.009; ဆား vs 0.01 mg / kg eticlopride: F(1,21) = 4.477, p = 0.046; 0.03 vs ဆား / ကီလိုဂရမ် eticlopride mg: F(1,21) = 8.601, p <0.008) ။
Eticlopride မသက်ဆိုင်အုပ်စုတစ်စု (ဆေးထိုးခြင်း, လီဗာရွေးချယ်မှုအောင်းနေချိန်အတွင်းအထွေထွေတိုးစေသော: F(1,29) = 13.794, p = 0.001; အုပ်စုတစု: F(1,29) = 0.32 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ) ။ သို့သော်ဒီအကြိုးသကျရောအမြင့်ဆုံးထိုးခြင်းနှင့်တိရိစ္ဆာန်များမှာသာသိသာခဲ့သည်ကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာမသေချာမရေရာလီဗာကိုရှေးခယျြဖို့စိတ်သဘောထားထိန်းသိမ်းထား (ဆား 0.01 vs / ကီလိုဂရမ် eticlopride mg: F(1,29) = 0.008 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ; 0.03 vs ဆား / ကီလိုဂရမ် eticlopride mg: F(1,29) = 5.23, p = 0.03; ရွေးချယ်မှု: F(1,29) = 13.794, p = 0.001) ။ လီဗာရွေးချယ်မှုအောင်းနေချိန်အတွင်းတိုးဆန့်ကျင်, eticlopride (ဆေးထိုးဆုလာဘ်စုဆောင်းရန်ခေါ်ဆောင်သွားအချိန်ကိုမထိခိုက်ခဲ့ဘူး: F(2,34) = 0.267 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ; ထိုး-ရွေးချယ်မှု-အုပ်စုတစ်စု: F(2,34) = 0.99 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ) ။ : မူးယစ်ဆေးဝါး (ဆေးထိုးလုပ်ရွေးချယ်မှုပျက်ကွက်၏နံပါတ်မထိခိုက်ပေမဲ့ F(2,58) = 1.626 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ; ထိုး-အုပ်စုတစ်စု: F(2,58) = သိသိသာသာမဟုတ် 0.132,), eticlopride ၏မြင့်မားထိုးသိသိသာသာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ထည့်သွင်းသည်ဤကိန်းဂဏန်းများအနိမ့်ကျန်ရစ်ပေမယ့်နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက်အပေါက်ပျက်ကွက်၏နံပါတ်တိုးလာ (အထိခိုက်မခံအာမခံ, 3.57 ± 0.67; ထုံထိုအာမခံ, 2.82 ± 0.45; ထိုး: F(2,58) = 29.143, p <0.0001; ဆား vs 0.03 mg / kg eticlopride: F(1,29) = 37.679, p <0.0001) ။ မြင့်မားသောဆေးများသည်အုပ်စုနှစ်ခုလုံးတွင်ပြီးစီးသောစမ်းသပ်မှုများကိုလည်းလျော့နည်းစေခဲ့သည် (wager sensitive, 101.18 ± 9.11; wager insensitive, 78.4 ± 2.99; ဆေးထိုး) F(2,60) = 24.854, p <0.0001; ဆား vs 0.03 mg / kg eticlopride: F(1,30) = 31.663, p <0.0001) ။
အဆိုပါလောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် SCH 23390 အုပ်ချုပ်ရေးဆိုးကျိုးများ
SCH 23390 (အုပ်စုသည်ဖြစ်စေထဲမှာလီဗာရွေးချယ်မှုအပြုအမူမထိခိုက်ခဲ့ပါသဖန်းသီး။ 3; ထိုး-အုပ်စုတစ်စု: F(3,90) = 0.507 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ) ။
အဆိုပါ D ကို၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်း1 ရှေးခယျြမှုအပြုအမူအပေါ်အဲဒီ receptor ရန် SCH 23390 ။ SCH 23390 ဖြစ်စေအာမခံ-အထိခိုက်မခံ (ဆိုအလောင်းအစားအရွယ်အစားမှာမသေချာမရေရာလီဗာများအတွက် preference ကိုပြောင်းလဲပစ်ဘူးa) သို့မဟုတ်အာမခံ-အာရုံမခံစားနိုင်သော (b) ကြွက်များ။ ပြသဒေတာကို SEM ±အတောအတွင်းရှိပါတယ်။
နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက်, SCH 23390 ၏အမြင့်ဆုံးထိုးသိသိသာသာလီဗာ (အာမခံအထိခိုက်မခံ, 1.48 ± 0.04 ဖြစ်စေရွေးချယ်ဖို့ခေါ်ဆောင်သွားအချိန်ကိုတိုးတက်သဖြင့်, အာမခံအာရုံမခံစားနိုင်သော, 1.53 0.03 ±; ထိုး: F(3,90) = 4.791, p = 0.004; ထိုး-ရွေးချယ်မှု-အုပ်စုတစ်စု: F(3,90) = 1.925 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ; 0.01 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် SCH 23390 vs ဆား: F(1,30) = 13.066, p = 0.001) ။ SCH 23390 (ဆုလာဘ်စုဆောင်းဖို့ထိုးသည့်အောင်းနေချိန်မထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး: F(3,90) = 0.216 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ; ထိုး-ရွေးချယ်မှု-အုပ်စုတစ်စု: F(3,90) = 0.406 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ) ။ အမြင့်ဆုံးထိုးအုပ်ချုပ်သိသိသာသာတိုးလာပေါက်ပျက်ကွက် (အာမခံအထိခိုက်မခံ, 2.30 ± 0.50; ထုံထိုအာမခံ, 1.65 ± 0.28; ထိုး: F(3,90) = 32.869, p <0.0001; ၀.၀၁ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် SCH 0.01 vs ဆားငန် F(1,30) = 38.63, p <0.0001) နှင့်ပြီးစီးခဲ့စမ်းသပ်မှု၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချ (wager အထိခိုက်မခံ, 83.7 ± 14.88; wager အာရုံမခံစားနိုင်သော, 100.91 ± 5.28; ဆေးထိုး: F(3,90) = 25.709, p <0.0001; ၀.၀၁ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် SCH 0.01 vs ဆားငန် F(1,30) = 25.247, p <0.0001) ။
အာမခံ sensitivity ကိုနှင့် striatal: D အကြားဆက်စပ်မှု2 /3သို့မဟုတ်: D1 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆ
ကိုးတိရိစ္ဆာန်များပေစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အဘို့အကျပန်းရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ရွေးချယ်ထားသောအုပ်စုတစ်စုအခြေခံမှာအုပ်စု၏ကျန် (အလောင်းအစားအရွယ်အစား-ပေ group မှလီဗာရွေးချယ်မှုအပြုအမူမကွာခြားချက်ပြသခဲ့သည်: F(2,20) = 1.336 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ) ။ : D ၏အောက်ခြေအဆင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းပိုမိုမြင့်မားသောအာမခံ sensitivity ကို2 /3အဆိုပါ dorsal striatum အတွက်အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (သဖန်းသီး။ 4a; r2 = 0.483, p = 0.04) ။ Autoradiography ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဒီလျော့ချရေး dorsal striatal: D ၏သိပ်သည်းဆတစ်ဦးရွေးချယ်ကျဆင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ခဲ့ကွောငျးကိုအတည်ပြု2 /3receptors (သဖန်းသီး။ 4b; r2 = 0.601, p = မဟုတ်ဘဲတိုးမြှင် DA လွှတ်ပေးရန်ထက် 0.01) ။ နှစ်ဦးစလုံးဟာပေနှင့် autoradiography စည်းနှောင်တိုင်းတာထိုနည်းတူပြင်းပြင်းထန်ထန် (အသီးအသီးအခြားအဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်r2 = 0.60, p = 0.02) ။ ဆနျ့ကငျြမရှိသိသိသာသာဆက်စပ်အာမခံ sensitivity ကိုနဲ့ D အကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်2 /3နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆ, medial နှစ်ဦးနှစ်ဖက် orbitofrontal cortex, ဒါမှမဟုတ် medial cortex (r2 = 0.17 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ; r2 = 0.12 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ; r2 = 0.12 မဟုတ်ဘဲသိသာထင်ရှားသော, ဒေတာပြမပါ) ။ အလားတူပင်အာမခံ sensitivity ကိုနဲ့ D အကြားမျှအရေးပါသောဆက်စပ်မှုရှိခဲ့1 အဆိုပါ striatum အတွက် binding အဲဒီ receptor (သဖန်းသီး။ 5; r2 = 0.03 မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ) ။
အာမခံ sensitivity ကို striatal D နဲ့ဆက်နွယ်နေပါသည်2 /3အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆ။ a, b, Striatal: D2 /3(အားဖြင့်တိုင်းတာအဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု,aတစ်ဦးတစ်သျှူး input ကိုကို BP ကဲ့သို့) ပေND နှင့် (b) autoradiography သုံးပြီး [11ကိန်းအားဖြင့်ခန့်မှန်းခြေအဖြစ်ကို C] raclopride, အာမခံ sensitivity ကိုခန့်မှန်း m (အမြင့်ဆုံးအနုတ်လက္ခဏာတန်ဖိုးများမြင့်မားသောအာမခံ sensitivity ကိုညွှန်ပြ) ။ c, d, D ကို2 /3အသီးသီးပေနှင့် autoradiography ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်အာမခံ-အာရုံမခံစားနိုင်သောတိရိစ္ဆာန်အတွက်အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု။ e, fတစ်ဦးအာမခံ-အထိခိုက်မခံကြွက်ထံမှတူညီသောဒေတာ။ ဒေတာကိုအတူတူစကေးပေါ်တွင်ပြသလျက်ရှိသည်။ ပေနှင့် autoradiography ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမှရရှိသောအဆိုပါစည်းနှောင်တိုင်းတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည် (r2 = 0.60, p = 0.02) ။
အာမခံ-sensitivity ကိုများနှင့် [၏ဒီဂရီအကြား null ကြားဆက်ဆံရေး3H ကို] SCH 23390 D ကိုမှ binding1 အဆိုပါ striatum အတွက် receptors ။ အာမခံ-sensitivity ကို striatal: D ကနေခန့်မှန်းမရနိုင်1 အဲဒီ receptor ကိုစညျး။
50 လေးသာမှု: ဤတွင်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက်အာမခံ၏ပေးပို့အာမခံချက်ပေးသောa"ကဘေးကင်းလုံခြုံ" လီဗာနှင့် 50 နှင့်အတူနှစ်ဆအလောင်းအစားအရွယ်အစားသို့မဟုတ်ဘာမျှမကယ်နှုတ်ရသောတစ်ဦး "မရေမရာ" လီဗာအကြားရွေးချယ်ခဲ့သည်။ တချို့ကကြွက်ဟာမသေချာမရေရာ option ကိုများအတွက်အလယ်အလတ် preference ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း, အရွယ်အစားအလောင်းအစားလုပ်ဖို့အကြီးအကျယ်အာရုံမခံစားနိုင်သောထင်ရှား။ , အဆိုပါအာမခံတိုးမြှင့်အဖြစ်သို့သော်အခြားသူများကိုအကြီးအကျယ်ကျယ်ပြန့်လေ့ကျင့်ရေးပေမယ့်အာမခံချက်ဆုလာဘ်ဆီသို့မိမိတို့၏ preference ကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားလေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောရွေးချယ်မှုပုံစံမဆိုအကျိုးရှိအပ်နှင်းမမသေချာမရေရာ option ကိုမှ switching အတွက်အဓိပ်ပါယျမရှိသောစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
ဖက်တမင်းဆေးပြားသည့် D သော်လည်းဤအာမခံ-အထိခိုက်မခံကြွက်အတွက်မသေချာမရေရာ option ကိုရှေးခယျြမှုတိုးလာ2 /3ရန် eticlopride အာမခံ-ထုံထိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့တုန့်ပြန်ထိုသို့သောအုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုအထူးသဖြင့်: D မှတဆင့် DA အချက်ပြအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအပြောင်းအလဲအကြံပြု2 /3receptors, အာမခံ sensitivity ကို၏ဒီဂရီကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ ပေနှင့် autoradiography ပိုမိုမြင့်မားအာမခံ sensitivity ကိုနိမ့် dorsal striatal D နဲ့ဆက်နွယ်နေကြောင်းအတည်ပြုလေ့လာဆန်းစစ်2 /3အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်သိပ်သည်းဆ, လှုံ့ဆော်အလွဲသုံးစားမှုမှအားနည်းချက်အပ်နှင်းဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ပုံစံ။ ထို့ကွောငျ့အမရေရာအောက်မှာအဓိပ်ပါယျမရှိသောရွေးချယ်မှု, PG များအတွက် putative အန္တရာယ်အချက်, ဖြစ်ကောင်းဓာတုနှင့်အမူအကျင့်စှဲဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်ဘုံဇီဝ phenotype ခံရမှုကြောင်းညွှန်ပြ, ဓာတုမှီခိုအဖြစ်အလားတူ biomarker နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ကြောင်းအမူအကျင့်သင်တန်းပေးခြင်း, သို့မဟုတ် pharmacological စိန်ခေါ်မှုများ, ပြောင်းလဲ D ကိုဖြစ်နိုင်သမျှက2 /3အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များအတူတူမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း protocol ကိုထိတွေ့ခဲ့သည်အဖြစ်သို့သော်လည်းဤအချက်များအာမခံ sensitivity ကိုနှင့်အဲဒီ receptor စကားရပ်များအကြားဆက်ဆံရေးများအတွက်အကောင့်ဖွယ်မရှိပေ။
ရလဒ်အပြန်အလှန်ထင်ရစေခြင်းငှါ, တဦးတည်း (စွဲအားနည်းချက်နဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့, အစား သာ. ကြီးအာမခံ sensitivity ကိုထက်, မရေရာများအတွက် preference ကိုမျှော်လင့်ထားစေခြင်းငှါ,ယာဉ်ကြောနှင့် Cherek, 2001) ။ အမှန်မှာထိုအိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကိုနဲ့တူစမ်းသပ်မှုအတွက်မြင့်မားသောအန္တရာယ်ရွေးချယ်စရာဦးစားပေးရှေးခယျြမှု (စွဲလမ်းများအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာချိုးဖောက်မှုများ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ, မှာ-အန္တရာယ်ရှိသူများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်Bechara et al ။ , 2001; Goudriaan et al ။ , 2005; Garon et al ။ , 2006) ။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သော Paradigm ၌, "သွေးဆောင်" မရေမရာရွေးချယ်စရာနောက်ဆုံးမှာမဲ့ဖြစ်စေသည်ဖြစ်ကြပြီးလျော့နည်းဆုလာဘ်မှု။ မသေချာမရေရာ၏ဒီဂရီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းစွာလေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက်များတွင်မျှော်မှန်းထားခဲ့ပါတယ်သော်လည်းထို့အပြင်ဘာသာရပ်များမွငျဆှေးနှေးမှုမြားအတှကျ (အစကတည်းကမှာအားဖြည့်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်၏သတိမထားမိများမှာ ယုနှင့်ဒါယန်း, 2005; Platt နှင့် Huettel, 2008) ။ အဆိုပါကြွက်တာဝန်အတွက်ဖြစ်စေ option ကိုသီးသန့်ရွေးချယ်မှုကိုလည်းအချိန်ကျော်တူညီပိုက်ကွန်ကိုဆုလာဘ်မှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့နှုန်းထားများသင်ယူခြင်းအတွက်အပြောင်းအလဲကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘဲမရေရာမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဘက်လိုက်မှုဆနျးစစျနိုငျသညျ, သို့မဟုတျဘာသာရပ်များပါဝင်သည့်အာရုံကြော circuitry သြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ဒီဂရီ (လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်နှစ်ဦးစလုံး၏အသားတင်အမြတ်အတွက်မျှော်မှန်းထားသည်ကွဲပြားမှု, အကဲဖြတ်ပုံကိုယုနှင့်ဒါယန်း, 2005; Schönberg et al ။ , 2007; Platt နှင့် Huettel, 2008) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာထို့ကြောင့်မဟုတ်ဘဲမြင့်မားသောစွန့်စားမှုအဘို့အရိုးရှင်းသော preference ကိုထက်မသေချာမရေရာအောက်မှာဘက်လိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၏ဒီဂရီ, (ယေဘုယျလူဦးရေကနေပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေခွဲခြားကြောင်းလက်တွေ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့်ကိုက်ညီcoventry နှင့်ဘရောင်း, 1993; Michalczuk et al ။ , 2011).
အမှန်စင်စစ်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များအရ wager sensitivity နှင့်မသေချာမရေရာမှုအတွက် ဦး စားပေးမှုများသည်ခွဲထုတ်။ မရပါ။ အမ်ဖီတမင်းသည်အလွှာအလွှာအားလုံးတွင်မသေချာမရေရာမှုရှိသည့်လီဗာကိုရွေးချယ်မှုကိုတိုးမြှင့်လိုက်သည်။ အလောင်းအစားများ၏အရွယ်အစားကိုကျပန်းအစီအစဉ်ဖြင့်တင်ပြသောကြောင့်အမ်ဖီတမင်း၏ဇီဝကမ္မစွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုငြင်းခုံရန်ခက်ခဲသည်။Robbins, 1976) ။ စိတ်ကြွဆေးအာမခံ-ထုံထိုကြွက်များအတွက်မသေချာမရေရာလီဗာများအတွက်တသမတ်တည်း preference ကိုပြောင်းလဲပစ်မပေးသောကြောင့် (စိတ်ကြွဆေးသဘောထားတွေပြောင်းတိုးပွားလာကြောင်းသံသယဖြစ်ပါသည်Evenden နှင့် Robbins, 1985; Weiner, 1990) ။ အဆိုပါမသေချာမရေရာလီဗာ၏ baseline ရွေးချယ်မှု (preference ကိုတိုးမြှင့်ဖို့မူးယစ်ဆေးအဘို့အခွင့်အလမ်းအများအပြားထွက်ခွာ, ဒီအုပ်စု 70% မှာလည်းဖြစ်ခဲ့သည်စိန့်Öngeနှင့် Floresco, 2009) နှင့်မဖြစ်နိုင်မျက်နှာကျက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်။ အများဆုံးဝမ်းသာအားရနိဂုံးချုပ်မှာ amphetamine သည်မသေချာမရေရာသောရွေးချယ်စရာများအတွက် wager-sensitive ကြွက်များ၏ကြိုက်နှစ်သက်မှုကိုတိုးမြှင့်စေပြီးယခင်တွေ့ရှိချက်များကိုဖြစ်နိုင်ခြေလျှော့ချခြင်းအလုပ်ကို အသုံးပြု၍ ပြန်လည်ပြုလုပ်ခဲ့သည် (စိန့်Öngeနှင့် Floresco, 2009) ။ ဤအချက်အလက်များအရအငြင်းပွားဖွယ်ကောင်းသောကြွက်များသည်အမ်ဖီတမင်း၏သက်ရောက်မှုများကိုထိခိုက်လွယ်မှုနည်းပါးပြီးအမ်ဖီတမင်းသည်လောင်းကစားသမားများအတွက်လောင်းကစားလိုသော်လည်းကျန်းမာသန်စွမ်းသောထိန်းချုပ်မှုတွင်မရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရခြင်းကိုထင်ဟပ်စေသည်။Zack နှင့် Poulos, 2004).
တိရိစ္ဆာန်များဦးစားပတ်ဝန်းကျင်၏ပိုကောင်းတဲ့မော်ဒယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လျော့နည်းကြိုတင်ခန့်မှန်းရလဒ်ရှိသည်သောရွေးချယ်မှုများစူးစမ်းလေ့လာရန်အဘို့အဒါဟာ (သပ္ပါယ်ဖြစ်နိုင်သည်Pearce နှင့်ခန်းမ, 1980; Hogarth et al ။ , 2008) ။ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာ options များရွေးချယ်ရာတွင်မရှိကုန်ကျစရိတ်လည်းမရှိသည့်အခါများစွာသောကျန်းမာတိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသား (မသေချာမရေရာရလဒ်များပိုနှစ်သက်Adriani နှင့် Laviola, 2006; Hayden et al ။ , 2008; Hayden နှင့် Platt, 2009) ။ လူမှုစိတ်ပညာစမ်းသပ်ချက်ကျနော်တို့ (အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ၏မရှိခြင်းအတွက်မသေချာမရေရာရလဒ်များမျက်နှာသာမှ predisposed စေခြင်းငှါညွှန်ပြကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဆန့်ကျင်, မရေရာအချို့ကိုဒီဂရီကြုံနေရနောက်တဖန်, ပျော်ရွှင်မှု သာ. ကွီးမွတျခံစားခကျြကို engenders သောအကြံပြုWilson က et al ။ , 2005).
မေးခွန်းအာမခံ-အထိခိုက်မခံကြွက်များတွင်တွေ့မြင်ရွေးချယ်မှုအတွက်ပြောင်းကုန်ပြီအုပ်ချုပ်အရာကိုအဖြစ်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အမူအကျင့်ရွေးချယ်မှုသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များဆိုလိုယူဆရင်, မြောက်မြားစွာစမ်းသပ်ချက် (ကြွက်အချိန်ကျော်ဆုလာဘ်ပေးပို့ပေါင်းစည်းနိုင်မသရုပ်ပြBalleine နှင့် Dickinson, 1998) ။ ထို့ကြောင့်အာမခံ-အထိခိုက်မခံကြွက်ကစားအတွက်အားဖြည့်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်၏သတိမထားမိခဲ့မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။ ချို့ယွင်းယာယီပေါင်းစည်းမှုလည်းစဉ်ဆက်မပြတ်လုံခြုံ option ကိုများအတွက် preference ကိုထက်အလောင်းအစားအရွယ်အစားတိုးအဖြစ်အာမခံဆုလာဘ်ဆီသို့တစ်ဦးပြောင်းကုန်ပြီမှုသင့်ပါတယ်။ အာမခံ-အထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်အာမခံ-ထုံထိုကြွက်များစမ်းသပ်မှုတွေ၏နှိုင်းယှဉ်နံပါတ်များကိုပြီးစီးခဲ့နှင့်လီဗာကိုရှေးခယျြနှင့်ဆုလာဘ်စုဆောင်းရန်အလားတူ latency ပြအမျှကြောင့်အာမခံ-အထိခိုက်မခံတိရိစ္ဆာန်များ task ကိုဖျော်ဖြေဖို့လျော့နည်းနိုင်ပါသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြသည်အခြရန်ခဲယဉ်းသည်။ ထိုနည်းတူစွာဤအောင်းနေချိန်ဒေတာကြောင့်အတိအလင်းတိရိစ္ဆာန်များ linearly ဆုလာဘ်တန်ဖိုးတိုးအကဲဖြတ်ရန်သောယူဆချက်ပေးထားဒီသရုပ်ပြအနာဂတ်အတွက်အသုံးဝင်သောလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းယင်းအုပ်စုနှစ်စု, ဆွေမျိုးဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုမိမိတို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္အကဲဖြတ်အတွက်ကွဲပြားကြောင်းအကြံပြုကြပါဘူး။
ဒေတာများလိုအပ်တိုးအဖြစ်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေမယ့်ပိုမိုကြီးမားတဲ့ဆုလာဘ် (ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းမသေချာ / ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာရွေးချယ်စရာဖို့စဉ်ဆက်မပြတ် incremental အမြတ်နဲ့ဆက်စပ်အချို့သော / ယုံကြည်စိတ်ချရသောရွေးချယ်စရာပိုနှစ်သက်ထံမှအကူးအပြောင်း, ထိုအကြံပြုBateson နှင့် Kacelnik, 1995; Caraco, 1981; Schuck-Paim et al ။ , 2004) ။ ထိုသို့သောဆိုင်းကရှင်းပြသည်နိုင်ပါတယ်: သေးငယ်ဆုလာဘ်များတဖြည်းဖြည်းစုဆောင်းခြင်းအချိန်အတွက်လိုအပ်ကြောင်းကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးအခါပိုကြီးဆုလာဘ်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအာမခံချက်ပေလိမ့်မည်။ အလောင်းအစားအရွယ်အစားကဒီမှာလျော့နည်းသွားအဖြစ်သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအချက်များဟာမသေချာမရေရာ option ကိုမျက်နှာပြောင်းကုန်ပြီရှင်းပြလို့မရပါဘူး။ မွတ်မပြေနိုင်သောအဆင့်ဆင့်ဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးချင်းစီ session ကိုတစ်လျှောက်လုံးမြန်ပေမယ့်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မတူညီသောအလောင်းအစားအရွယ်အစားတွေ့ကြုံရသောအမိန့်နေ့စဉ်စမ်းသပ်မှုအတွင်းနှင့်အကြား randomized ခဲ့သည်။ လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် intertrial ကြားကာလတိုးမြှင့်အဖြစ်ဆုလာဘ်ပေးပို့ delay လုပ်ခြင်းကိုလည်း (မသေချာမရေရာရှေးခယျြစရာဘို့ preference ကိုလျော့နည်းကျဆင်းနိုင်ပါတယ်Bateson နှင့် Kacelnik, 1997; Hayden နှင့် Platt, 2007) ။ သို့သော်ဆုလာဘ်အမြဲလက်ရှိစမ်းသပ်မှုအတွက်ဖြစ်စေလီဗာ၏ချက်ချင်းအောက်ပါရွေးချယ်ရေးကိုအပ်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထိုမရေမရာလီဗာပေါ်မှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆုလာဘ်ပေးပို့မလွှဲမရှောင်ဆုလာဘ်များအကြားကြာကြာကွာဟချက်မှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအာမခံ-အထိခိုက်မခံတိရိစ္ဆာန်များအားဖြင့်ပြသရွေးချယ်မှုပုံစံကိုချက်ချင်းဆုလာဘ်တစ်ခု myopia ထင်ဟပ် သို့ဖြစ်. ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အာမခံ sensitivity ကို သို့ဖြစ်. ကြောင့်အနာဂတ်ပြန်ကျော်ချက်ချင်းအကျိုးအမြတ်အပေါ်တစ်ဦးတိုမြော်အမြင်အာရုံမှစွန့်စားမှုအောက်မှာဆင်းရဲသားကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက်အထောက်အကူနိုင်ဘူး။ အမှန်စင်စစ်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ (လေ့လာတွေ့ရှိသိမြင်မှုပျက်ယွင်း၏ဒီဂရီနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်ထားတဲ့ပို steeply ဆုလာဘ်နှောင့်နှေးလျှော့Dixon က et al ။ , 2003; Michalczuk et al ။ , 2011).
အာမခံ sensitivity ကိုသေးငယ်တဲ့ဒါပေမယ့်အာမခံအမြတ်ရရှိနိုင်လျှင်ဘာသာရပ်များပိုကြီးတဲ့အကျိုးသည်လောင်းကစားလုပ်တဲ့နည်းများပါတယ်အတွက်ဘောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအန္တရာယ်ကို-ဆန္ဒရှိလက်မောင်း, (၏အတန်ငယ်ဆင်တူဖြစ်ပါသည်Kahneman, 2003) ။ စွန့်စားမှုခြင်းကိုမနှစ်သက်ပိုက်ကွန်အမြတ်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေဆဲပင်သော်လည်း, ထိုအာမခံ၏အရွယ်အစားနှင့်အတူတိုးပွားစေပါသည်။ ဒီသရုပ်ဆင်ခြင်မဲ့ရှင်းပြဖို့ရှာကြံမှာတော့ Dual-ဖြစ်စဉ်ကိုသဘောတရားပညာရှင်တွေရဲ့နှစ်ခုဆုံးဖြတ်ချက်ချသည် Modes positive: အကိုထိခိုက် mode မှာလုပ်ရွေးချယ်မှုများ (အင်အားစိုက်ထုတ်အလိုလိုသိနှင့်မကြာခဏ heuristics လွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်သော်လည်းအဆိုပါ deliberative mode မှာလုပ်တို့လည်းအားထုတ်မှုဖြစ်ကြပြီးစဉ်းစားဟန်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းလိုအပ်Osman, 2004; အီဗန်, 2008; Strough et al ။ , 2011) ။ အာမခံ-အထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်အာမခံ-ထုံထိုတိရိစ္ဆာန်များထို့ကြောင့်အသီးသီးဘေးဒဏ်သင့်ခြင်းနှင့် deliberative သည် Modes အတွက်တာဝန်ချဉ်းကပ်နိုင်။ သို့သျောလညျးကိုထိခိုက်ရွေးချယ်မှုပြဋ္ဌာန်းဖို့မြန်ဖြစ်သင့်သော်လည်း, ဆုံးဖြတ်ချက်ချမြန်နှုန်းသည့်အာမခံတိုးမြှင့်အဖြစ်တိရိစ္ဆာန်များလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ပိုပြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုမတှေ့ခဲ့ကွောငျးအကြံပြုခြင်း, ထိုအုပ်စုနှစ်စုကိုဖြတ်ပြီးနှင့်အလောင်းအစားအရွယ်အစားကိုဖြတ်ပြီးညီမျှခဲ့သည်။ ကြွက်မသေချာမရေရာအောက်မှာဘက်လိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းပြဆိုတဲ့အချက်ကို, လက်ထက်, ရှုပ်ထွေးသောဆင်ခြင်ခြင်းများအတွက်ကန့်သတ်အခန်းကဏ္ဍဆိုလိုပေမည်။ ထို့ပြင် (ထိုဘောင် heuristic သုံးပြီးဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်သည်အောင် frontocortical activation လျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်, ဒီအဓိပ်ပါယျမရှိသောအမူအကျင့်အဓိကအား subcortical မောင်းနှင်ကြောင်းအကြံပြု, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့အဆိုပါ amygdala ၏စုဆောင်းမှုတိုးလာde Martino et al ။ , 2006) ။ striatal D ကိုလျော့နည်းသွား2 /3အဲဒီ receptor စကားရပ် (ပစ္စည်းဥစ္စာအချိုးဖောက်ဆုံး၏ orbitofrontal cortex အတွင်း hypofunction ဆက်စပ်နေသည်Volkow နှင့်မုဆိုး, 2000), ထိုကဲ့သို့သောလျှော့ချ cortical လှုပ်ရှားမှုထိုနည်းတူ sensitivity ကိုဆုံးဖြတ်သည်ခံရဖို့ဖြစ်နေဆဲအာမခံကိုအထောက်အကူပြုရန်ရှိမရှိသော်လည်း။
Neuroimaging ဒေတာတစ်ခုက D ကနေတဆင့်, DA-modulated striatal လှုပ်ရှားမှုလျော့ကျလာကြောင်းညွှန်ပြ2 အဲဒီ receptor ရန်, ချို့ယွင်းတန်ဖိုးကို-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချ (မှဦးဆောင်, ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများ၏ကိုယ်စားပြုမှုပွောငျးလဲPessiglione et al ။ , 2006) ။ striatal activation ကိုလည်းအန္တရာယ်-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချ (စဉ်အတွင်းပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်လျော့နည်းသွားReuter et al ။ , 2005) ။ ဒါဟာ striatal: D အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု သို့ဖြစ်. စိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်2 /3ဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုလေ့လာအဖြစ်အဲဒီ receptor စကားရပ်, eticlopride များ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများဖျန်ဖြေခြင်းနှင့်အာမခံ sensitivity ကို၏ဒီဂရီကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မယ်။ သိသိသာသာပိုပြီးအချိန်မတန်မီ, ဒါမှမဟုတ်ထကြွလွယ်သောစေကြွက်တစ်ခုအာရုံကိုတာဝန်အတွက်တုံ့ပြန်မှုကိုလည်းနည်းပါးလာ striatal D ကိုဖော်ပြ2 /3receptors နှင့်စွဲလမ်းနဲ့တူအောင်မူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေတဲ့ပုံစံ Development (Dalley et al ။ , 2007) ။ လူထုကိုသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များမော်တာ Impulse နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘက်လိုက်မှုကိုထိန်းချုပ်သော်လည်း, နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ရပ် (စွဲလမ်းမမှန်ချိတ်ဆက်ပြီVerdejo-Garcia et al ။ , 2008; Clark က, 2010), နှင့်လက်ရှိဒေတာအခြေခံ neurobiology အနည်းဆုံး striatum ရဲ့အဆင့်မှာထပ်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ နောက်ထပ်အလုပ်ကဤအပြုအမူ၏အလှနျမှီခိုစူးစမ်း, နှင့်အလားတူဦးနှောက်ယန္တရားများဓာတုနှင့်အမူအကျင့်စှဲဖို့အားနည်းချက်အပ်နှင်းခြင်းရှိမရှိဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ကုသမျိုးစုံစွဲရောဂါအတွက်ထိရောက်သောမည်လောစဉ်းစားသည့်အခါဤသို့သောသတင်းအချက်အလက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောသက်သေပြနိုင်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 7, 2012 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
တည်းဖြတ်မူစက်တင်ဘာလ 5, 2012 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
လက်ခံစက်တင်ဘာလ 6, 2012 ။
ဤလုပ်ငန်းကနျြးမာရေးသုတေသန (CIHR) အတွက်ကနေဒါ Institutes ထံမှ CAW မှချီးမြှင့်ထားတဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်ပုံငွေကထောက်ပံ့နှင့် VSCAW နှင့် VS မှချီးမြှင့်မယ့်အမျိုးသားသိပ္ပံနှင့်ကနေဒါ၏အင်ဂျင်နီယာသုတေသနကောင်စီထောက်ပံ့ကြေးလည်းကျန်းမာရေးသုတေသနများအတွက်မိုက်ကယ်စမစ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှတဆင့်လစာထောက်ပံ့မှုကိုခံယူခဲ့သည် နှင့် CIHR နယူးသုတေသနဆုကိုပရိုဂရမ်မှတဆင့် CAW ။
CAW ယခင်ကတစ်ဦးသက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ် Theravance တစ်ဦးဘိုင်အိုဆေးဝါးကုမ္ပဏီအတွက်တိုင်ပင်ခဲ့သည်။ အခြားစာရေးဆရာများအဘယ်သူမျှမယှဉ်ပြိုင်ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးစီးပွားများကိုဘော်ပြရမည်။
စာပေးစာယူ Catharine အေ Winstanley, စိတ်ပညာဌာန, ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်, 2136 အနောက် Mall, ဗန်ကူးဗား, ဘီစီ V6T 1Z4, ကနေဒါမှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
မူပိုင်ခွင့်© 2012 စာရေးသူ 0270-6474 / 12 / 3215450-08 $ 15.00 / 0
Adriani W က,
Self-ထိန်းချုပ်မှု parameters တွေကိုများ၏တိုင်းတာခြင်းများအတွက်ဂယက်: (2006) နှစ်ခုရွေးချယ်မှုတာဝန်များကိုအတွက်ကြီးမားသောနှင့်ရှားပါးဆုလာဘ်များအတွက်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ပေမယ့်ဦးစားပေးနှောင့်နှေး။ BMC neuroscience 7: 52 ။
(1998) ဂိုး-ညွှန်ကြားဆာပအရေးယူဆောင်ရွက်မှု: အရေးပေါ်နှင့်မက်လုံးပေးသင်ယူမှုနှင့်၎င်းတို့၏ cortical အလွှာဟာ။ Neuropharmacology 37: 407-419 ။
Bateson M က,
fixed နှင့် variable ကိုအစားအစာရင်းမြစ်များအတွက် (1995) Preferences ကို: ငွေပမာဏအတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနှင့်နှောင့်နှေး။ J ကို Exp စအိုပြုမူနေ 63: 313-329 ။
အစားအစာမှကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းရခက်နှောင့်နှေးမှုအတွက် (1997) Starlings က '' ဦး စားပေး။ Animation ပြုမူနေ 53: 1129-1142 ။
Dolan S က,
Denburg N ကို,
Anderson က SW,
အလုပ်မဖြစ်တဲ့ ventromedial prefrontal cortex ချိတ်ဆက် (2001) ဆုံးဖြတ်ချက်-အောင်လိုငွေပြမှု, အရက်နှင့်လှုံ့ဆော်ချိုးဖောက်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ Neuropsychologia 39: 376-389 ။
anterior cingulate cortex အားဖြင့် (2007) အန္တရာယ်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်။ Cogn ပြုမူနေ neuroscience အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု 7: 266-277 ။
(2008) အန္တရာယ်, ပဋိပက္ခ, နှင့် anterior cingulate cortex အတွက်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်သက်ရောက်မှု၏ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်။ ဦးနှောက် Res 1202: 99-108 ။
Caraco T က
မှောင်မိုက်-eyed juncos အတွက် (1981) စွမ်းအင်ဘတ်ဂျက်, အန္တရာယ်နှင့် forage ဦးစားပေး (Junco hyemalis) ပြုမူနေ Ecole Sociobiol 8: 213-217 ။
ခန်းမ J ကို,
(2002) Emotion နှင့်လှုံ့ဆော်မှု: အပု amygdala ၏အခန်းကဏ္ဍ, ventral striatum နှင့် prefrontal cortex ။ neuroscience Biobehav ဗြာ 26: 321-352 ။
Aitken M က
(2006) ကအမူအကျင့်သိပ္ပံသုတေသီများအတွက် ANOVA (Lawrence Erlbaum Associates မှ, လန်ဒန်) ။
Clark က L ကို
(2010) ဆုံးဖြတ်ချက်-အောင်လောင်းကစားဝိုင်းစဉ်အတွင်း: သိမြင်မှုနှင့်အ psychobiological ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုပေါင်းစည်းမှု။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ 365: 319-330 ။
ဘရောင်း RI က
(1993) Sensation ရှာ, လောင်းကစားနှင့်လောင်းကစားစွဲလမ်း။ စှဲမွဲမှု 88: 541-554 ။
Brichard L ကို,
Lääne K သည်,
Pena Y ကို,
Murphy က ER,
Shah က Y ကို,
Probst K သည်,
ဟောင်ကောင် Y ကို,
(2007) နျူကလိယ D2 /3receptors ရို Impulse နှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်း accumbens ။ သိပ္ပံ 315: 1267-1270 ။
(2007) Associative သင်ယူမှုအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine အချက်ပြအတွက်ပြောင်းလဲနေသောဆိုင်း mediates ။ နတ် neuroscience 10: 1020-1028 ။
de Martino B က,
Seymour B က,
(2006) ဘောင်များ, ဘက်လိုက်မှု, နဲ့လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာဆင်ခြင်တုံတရားဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ သိပ္ပံ 313: 684-687 ။
Dixon က MR,
မာလီ J ကို,
Jacobs ကို EA
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအားဖြင့်ဝ (2003) နှောင့်နှေး။ J ကို Apple ကနျစှာနထေိုစအို 36: 449-458 ။
Emond က MS,
(2010) လောင်းကစားနှင့်ပတ်သက်သောသိမြင်စဉ်းစားတွေးခေါ်စတိုင်နဲ့ပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်းပြင်းထန်မှုအကြားအသင်းအဖွဲ့ဖျန်ဖြေ။ J ကို Gamble လုံး 26: 257-267 ။
(2008) dual-အပြောင်းအလဲနဲ့ဆင်ခြင်ခြင်း၏အကောင့်များတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်း, လူမှုရေးသိမှတ်ခံစားမှု။ Annu ဗြာ Psychol 59: 255-278 ။
ကြွက်ကအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုများ၏အစားအစာ-အားဖြည့်ခြေရာခံခြင်းအပေါ်ဃ-စိတ်ကြွဆေး, chlordiazepoxide နှင့် alpha-flupenthixol ၏ (1985) အဆိုပါဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 85: 361-366 ။
Garon N ကို,
Moore ကနေ C,
အဆိုပါအိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကို၏ကလေးတစ်ဦးဗားရှင်းကို အသုံးပြု. သာ ADHD နှင့်အတူသားသမီးများအတွက်အောင် (2006) ဆုံးဖြတ်ချက်, ADHD-စိုးရိမ်ပူပန် / စိတ်ဓာတ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကလေးများ။ J ကို Atten disorders 9: 607-619 ။
Diezi ကို C,
Schoch ကို C,
Eisenegger ကို C,
Fehr E ကို
(2009) လက်ျာ prefrontal cortex အတွက် Tonic လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ကိုတစ် ဦး ချင်းစီ '' အန္တရာယ်ယူပြီးခန့်မှန်းထားသည်။ Psychol သိပ္ပံ 20: 33-38 ။
Oosterlaan J ကို,
က de Beurs အီး,
ဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါး W က
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်အောင် (2005) ဆုံးဖြတ်ချက်: ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ, အရက်မှီခို, Tourette syndrome ရောဂါနှင့်အတူလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်။ ဦးနှောက် Res Cogn ဦးနှောက် Res 23: 137-151 ။
(2007) ယာယီလျှော့စမ်းသပ်တာမျိုးမျောက်များအတွက်အန္တရာယ် sensitivity ကိုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Curr Biol 17: 49-53 ။
Gatorade များအတွက် (2009) လောင်းကစား: လူသားများတွင်အရည်ဆုလာဘ်များအတွက်အန္တရာယ်-အထိခိုက်မခံဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ Animation Cogn 12: 201-207 ။
Nair AC အ,
စမ်းသပ်တာမျိုးမျောက်များအားဖြင့်အန္တရာယ်-ရှာအပေါ် (2008) သိမှုလွှမ်းမိုးမှု။ Judgm Decis Mak 3: 389-395 ။
Hogarth L ကို,
Duka T က
မသေချာမရေရာ၏အခန်းကဏ္ဍကို: လူ့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်သင်ယူမှုအတွက် (2008) အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်မျှော်လင့်ထား။ QJ Exp Pscychol (Hove) 61: 1658-1668 ။
(2003) တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်မှုအပေါ်တစ်ဦးကရှုထောင့်: မြေပုံကမ္ဘာ၏ကျိုးကြောင်းကာရံထားခြင်းခံရသည်။ နံနက် Psychol 58: 697-720 ။
(1979) Prospect သီအိုရီ: အန္တရာယ်အောက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Econometrica 47: 263-292 ။
Ladouceur R ကို,
Sylvain ကို C,
Boutin ကို C,
Lachance S က,
Doucet က C,
Leblond J ကို,
Jacques ကို C
(2001) ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း၏သိမှုကုသမှု။ J ကိုအာရုံကြော Ment dis 189: 774-780 ။
Walker က M ကို
သိမြင်မှုကုထုံးအတွက် Trends, လောင်းကစားအပေါ်တစ်ဦးကသိမြင်မှုရှုထောင့်, ed Salkovskis pm တွင် (Wiley, အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်), စစ 1996-89 အတွက် (120) ။
Laforest R ကို,
Siegel က S,
Yap J ကို
အဆိုပါ microPET-အာရုံစိုက်-F2007 ၏ (120) စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်။ ဖြတ်ကျော် Nucl သိပ္ပံ 54: 42-49 ။
ယာဉ်ကြော SD က,
(2001) maladaptive အပြုအမူသမိုင်းနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်များကတာအန္တရာယ်များ။ Exp Clin Psychopharmacol 9: 74-82 ။
ပေအချက်အလက်များ၏ဂရပ်ဖစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထံမှအသှေးကိုနမူနာမရှိဘဲ (1996) ဖြန့်ဖြူးအသံအတိုးအကျယ်အချိုး။ J ကို Cereb သွေးစီးဆင်းမှု Metab 16: 834-840 ။
Michalczuk R ကို,
Bowden-ဂျုံးစ် H ကို,
ဗြိတိန်အမျိုးသားပြဿနာလောင်းကစားဆေးခန်းတက်ရောက်ခြင်းရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက် (2011) Impulse နှင့်သိမြင်မှုပျက်ယွင်း: တစ်ပဏာမအစီရင်ခံစာ။ Psychol Med, 1-11 ။
Miller က NV,
(2008) လောင်းကစားဝိုင်းပြင်းထန်မှုနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ဆက်စပ်မှုအဖြစ်အဓိပ်ပါယျမရှိသောလောင်းကစားဝိုင်းသိမြင်မှုနှင့်အန္တရာယ်များလောင်းကစားဝိုင်းအလေ့အကျင့်၏အခနျးကဏ်ဍ၏တစ်ဦးကကနေဒါလူဦးရေအဆင့်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ J ကို Gamble လုံး 24: 257-274 ။
O'Doherty J ကို,
ဒါယန်းကို P ကို,
Schultz J ကို,
Deichmann R ကို,
Friston K သည်,
ဆာအေးစက်အတွက် ventral နှင့် dorsal striatum ၏ (2004) Dissociable အခန်းကဏ္ဍ။ သိပ္ပံ 304: 452-454 ။
Osman M က
(2004) ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်း၏ Dual-ဖြစ်စဉ်ကိုသီအိုရီတစ်ခုအကဲဖြတ်။ Psychon Bull ဗြာ 11: 988-1010 ။
Pavlovian သင်ယူမှုများအတွက် (1980) တစ်ဦးကမော်ဒယ်: CONDITION ပေမယ့်ခြွင်းချက်မရှိမဟုတ်လှုံ့ဆော်မှု၏ထိရောက်မှုအတွက်များပါတယ်။ Psychol ဗြာ 87: 532-552 ။
Pessiglione M က,
Frith CD ကို
(2006) Dopamine-မှီခိုခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများလူသားတွေအတွက်ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူများကိုအထောက်အကူပြု။ သဘာဝ 442: 1042-1045 ။
Huettel လုပ် SA
(2008) အန္တရာယ်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်း: မရေရာအောက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ neuroeconomics ။ နတ် neuroscience 11: 398-403 ။
Reuter J ကို,
Raedler T က,
နှင်းဆီ M က,
Gläscher J ကို,
(2005) ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်၏လျှော့ချ activation ဆက်စပ်နေပါတယ်။ နတ် neuroscience 8: 147-148 ။
ဆုလာဘ်-တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် psychomotor လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးကျပုံစံသက်ရောက်မှုအကြား (1976) ဆက်ဆံရေး။ သဘာဝ 264: 57-59 ။
Schönberg T က,
လူ့ striatum အတွက် (2007) စစ်ကူသင်ယူမှုအချက်ပြမှုများကိုဆုလာဘ်-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်း nonlearners ထံမှသင်ယူသူခွဲခြား။ J ကို neuroscience 27: 12860-12867 ။
Schuck-Paim ကို C,
Pompilio L ကို,
(2004) ပြည်နယ်-မှီခိုဆုံးဖြတ်ချက်များတိရိစ္ဆာန်ရွေးချယ်မှုအတွက်ကမ္ဘာ၏ကျိုးကြောင်း၏သရုပ်ချိုးဖောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ PLoS Biol 2: e402 ။
ဂူ PR စနစ်
(1997) ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်တစ်ခုအာရုံကြောအလွှာဟာ။ သိပ္ပံ 275: 1593-1599 ။
အန္တရာယ်-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ (2009) Dopaminergic စည်းမျဉ်း။ Neuropsychopharmacology 34: 681-697 ။
Jivan S က,
Doudet DJ သမား
(2005) ဘက်စုံအတွက်စသည်တို့ဖော့စဖရပ်ပုံရိပ် [3H] သုံးပြီးနှင့် [18F] radioligands: serotonin 5HT2 receptors အပေါ်နာတာရှည် desipramine ကုသမှုဆိုးကျိုးများ။ J ကို neuroscience နည်းလမ်းများ 141: 143-154 ။
Strough J ကို,
Schlosnagle L ကို
အဆိုပါသက်တမ်းတစ်လျှောက် (2011) ဆုံးဖြတ်ချက်-ချမှတ်ခြင်း heuristics နှင့်ဘက်လိုက်မှု။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 1235: 57-74 ။
(1997) သိမှုနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏အမူအကျင့်ကုသမှု: တစ်ထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှု။ J ကို Clin Psychol တိုင်ပင်ပါ 65: 727-732 ။
Trepel ကို C,
Fox က CR,
ဦးနှောက်အပေါ် (2005) Prospect သီအိုရီ? စွန့်စားမှုအောက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုသိမြင်မှုမှ neuroscience ဆီသို့။ ဦးနှောက် Res Cogn ဦးနှောက် Res 23: 34-50 ။
High-အန္တရာယ်သုတေသန, ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေနှင့်မျိုးရိုးဗီဇအသင်းအဖွဲ့လေ့လာမှုများကနေတွေ့ရှိချက်များ၏ပြန်လည်သုံးသပ်: ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်များအတွက်အားနည်းချက်အမှတ်အသားအဖြစ် (2008) Impulse ။ neuroscience Biobehav ဗြာ 32: 777-810 ။
(2000) စွဲလမ်းမှု, မလှူခြင်းနှင့် drive ကိုတစ်ဦးရောဂါ: အ orbitofrontal cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Cereb Cortex 10: 318-325 ။
Shafir S က,
အပြောင်းအလဲ၏ကှဲလှဲသို့မဟုတ်ကိန်းအဖြစ်အန္တရာယ်: (2004) လူသားများနှင့်အောက်ပိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အန္တရာယ် sensitivity ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ Psychol ဗြာ 111: 430-445 ။
ငုပ်လျှိုးနေတားစီး၏ (1990) ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအလွှာ: အ switching မော်ဒယ်။ Psychol Bull 108: 442-461 ။
Wilson က TD,
မသေချာမရေရာ၏ (2005) ကအပျော်အပါး: လူတွေမျှော်လင့်ကြဘူးနည်းလမ်းတွေထဲမှာအပြုသဘောစိတ်ခံစားမှုရှည်ရှည်။ J ကို Pers Soc Psychol 88: 5-21 ။
orbitofrontal cortex အတွက် (2007) DeltaFosB သော induction ကင်း-သွေးဆောင်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှုမှသည်းခံစိတ် mediates ။ J ကို neuroscience 27: 10497-10507 ။
ဖူ K သည်,
လိုင် B က,
Wong က AC အ
အဆိုပါ orbitofrontal cortex ၏ (2010) Dopaminergic မော်ဂျူအာရုံစူးစိုက်မှု, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ငါးရွေးချယ်မှုအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်ဖျော်ဖြေကြွက်များတွင်တုံ့ပြန်ထကြွလွယ်သောသက်ရောက်သည်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 210: 263-272 ။
ဒါယန်းကို P ကို
(2005) မငြိမ်သက်မှုကြောင့်, neuromodulation နှင့်အာရုံစူးစိုက်။ အာရုံခံဆဲလျ 46: 681-692 ။
Zack M က,
(2004) ဖက်တမင်းဆေးပြားပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေအတွက်အလောင်းအစားများနှင့်လောင်းကစားဝိုင်း-related semantic ကွန်ယက်လှုံ့ဆျောမှု primes ။ Neuropsychopharmacology 29: 195-207 ။
ဂျာနယ်ကလပ်: လောင်းကစားသည်အထိနှင့်လောင်းကစားစွဲ: ဆင်ခြင်မဲ့အတွက် Dopamine ၏အခန်းက္ပပွနျလညျသငျ့မွ
Guillaume Sescousse နှင့်
Hanneke EM တွင်း Ouden
အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်, 20 ဖေဖော်ဝါရီလ 2013, 33 (8): 3256-3258; Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.5828-12.2013
ရောဂါဗေဒရွေးချယ်မှု: အဆိုပါလောင်းကစားများ၏အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်လောင်းကစားစွဲ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,6နိုဝင်ဘာလ 2013, 33 (45): 17617-17623
ကျူးကျော်အပေါ် Dopamine ၏သက်ရောက်မှု: ကျန်းမာရေးအထီးအတွက်တစ်ဦး [18F] -FDOPA ပေလေ့လာမှု အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 23 အောက်တိုဘာလ 2013, 33 (43): 16889-16896
မြင့်မားထကြွလွယ်သောကြွက်: စွဲ၏, neurobiological မျိုးရိုးဗီဇနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ယန္တရားများကိုဆုံးဖြတ်ရန်တစ်ဦး endophenotype မော်ဒယ် ရောဂါ & Models, 1 မတ်လ 2013,6(2): 302-311
လောင်းကစားသည်အထိနှင့်လောင်းကစားစွဲ: ဆင်ခြင်မဲ့အတွက် Dopamine ၏အခန်းက္ပပွနျလညျသငျ့မွ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 20 ဖေဖော်ဝါရီလ 2013, 33 (8): 3256-3258